မူးယစ်ဆေးစွဲမှုတွင်သန္ဓေသားထိန်းညှိမှုပြုခြင်း - တိုက်ရိုက်နှင့်သွယ်ဝိုက်လမ်းကြောင်းအလယ်အလတ် spiny neurons (၂၀၁၁) - Your Brain On Porn
တပ်ဦး Neuroanat ။ 2011; 5: 41 ။ Doi: 10.3389 / fnana.2011.00041 ။ EPub 2011 ဇူလိုင် 18 ။
အာရုံကြောသိပ္ပံ၏ Fishberg ဦးစီးဌာန, Friedman ဦးနှောက် Institute မှ, ဆေးပညာနယူးယောက်၏သိနာတောင်ပေါ်ကျောင်း, နယူးယော့, USA ။
အဆိုပါ striatum အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများနှစ်ဦးစလုံး dorsal striatum အတွက်ကြာရှည်မော်လီကျူးများနှင့်ဆယ်လူလာကိုပြောင်းလဲစေနှင့်အတူ, စွဲလမ်းမူးယစ်ဆေးဝါးများ၏နာတာရှည်အကျိုးသက်ရောက်မှုများဖြန်ဖြေအတွက်သော့ချက်အခန်းကဏ္ဍနှင့် နျူကလိယ accumbens (ventral striatum) ။ striatum ရှိမူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးစားမှု၏ဇီဝဗေဒဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုများအပေါ်သုတေသနပြုမှုများစွာရှိနေသော်လည်းမကြာသေးမီအချိန်အထိ striatum ၏အလယ်အလတ် spiny neurons (MSNs) ၏အဓိကအခန်းကဏ္ drug နှစ်ခုသည်မူးယစ်ဆေးစွဲမှုတွင်ဆက်လက်ရှိနေဆဲဖြစ်သည်။ Transgene သို့မဟုတ် knockout ကြွက်များနှင့်ဗိုင်းရပ်စ် - ကမကထပြုထားသောမျိုးရိုးဗီဇလွှဲပြောင်းမှုများအပါအဝင်ဆဲလ်အမျိုးအစားဆိုင်ရာတိကျသောနည်းပညာများတွင်တိုးတက်မှုသည်မူးယစ်ဆေးဝါးများ၏ရေရှည်လုပ်ဆောင်မှုများတွင် MSN အမျိုးအစားခွဲနှစ်ခုအားပိုမိုနားလည်သဘောပေါက်ရန်နယ်ပယ်ကိုတိုးတက်စေခဲ့သည်။ အလွဲသုံးစားမှု၏။ ဤတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်စွဲလမ်းဖြန်ဖြေရာတွင် MSN အမျိုးအစားနှစ်ခု၏ကွဲပြားခြားနားသောမော်လီကျူးနှင့်အလုပ်လုပ်မှုဆိုင်ရာပံ့ပိုးမှုများကိုသတ်မှတ်ရာတွင်တိုးတက်မှုကိုပြန်လည်သုံးသပ်သည်။
dorsal striatum (dStr) နှင့် ventral striatum (နျူကလိယ accumbens, NAc) နှစ်ဦးစလုံးအတွက်အလွဲသုံးစားမှုကွိုးစားအားထုအစွမ်းထက်မော်လီကျူးများနှင့်ဆယ်လူလာကိုပြောင်းလဲ၏မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်, ဤပြောင်းလဲမှုအများအပြားအလတ်စား spiny အာရုံခံ (MSNs), dStr နှင့် NAc အတွက်ကျောင်းအုပ်ကြီး projection အာရုံခံအတွင်းဖြစ်ပေါ်ရာ ဤအဒေသများအားလုံးကိုအာရုံခံ၏ 90-95% များအတွက်အကောင့်။ သို့သော်သုတေသီများမကြာသေးမီကရှင်းလင်းစွာစွဲ-related ဖြစ်ရပ်အတွက်နှစ်ခု MSN ကို Subtype ၏ differential ကိုအခန်းကဏ္ဍကိုသတ်မှတ်နိုင်ခြင်းဖြစ်ချိန်အထိရှိသည်။ အဆိုပါနှစ်ဦးကို MSN ကို Subtype dopamine အဲဒီ receptor ၏သူတို့ရဲ့သန့်စင် 1 (ဃအားဖြင့်မတူညီကြသည်1) သို့မဟုတ် dopamine အဲဒီ receptor2(ဃ2) အဖြစ်ကောင်းစွာအဖြစ်အခြားမျိုးဗီဇ (Gerfen နှင့်လူငယ်တို့, 1988; Gerfen et al ။ , 1990; le Moines et al ။ , 1990, 1991; ဘားနတ် et al ။ , 1992; Ince et al ။ , 1997; Lobo et al ။ , 2006, 2007; Heiman et al ။ , 2008; gensat.org) နှင့် cortico-Basal ganglia လမ်းကြောင်းမှတဆင့်၎င်းတို့၏ကွဲပြား Project (တိုက်ရိုက် vs. သွယ်ဝိုက်လမ်းကြောင်းအားဖွငျ့၎င်းငျး, Gerfen, 1984, 1992) ။ အစောပိုင်းအလုပ်အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါး: D အပေါ်အများဆုံးသြဇာလွှမ်းမိုးမှုကွိုးစားအားထုကြောင်းအကြံပြု1မြောက်မြားစွာ dopamine အဲဒီ receptor agonists နှင့်ရန်၏အသုံးပြုမှုကိုမူးယစ်ဆေးဆုလာဘ်အပြုအမူတွေအတွက်တစ်ဦးချင်းစီ MSN ကို၏အလုပ်လုပ်တဲ့နှင့်မော်လီကျူးအခန်းကဏ္ဍသို့အရေးကြီးသောထိုးထွင်းသိမြင်မှုပေးနှင့်အတူ + MSNs, (ကိုယ်ပိုင်, 2010) ။ : D အောက်မှာ GFP ဖော်ပြကြောင်းချောင်းသတင်းထောက်ကြွက်အပါအဝင်သို့သော်လက်ရှိဆဲလ်-type အမျိုးအစား-တိကျတဲ့နည်းစနစ်,1 သို့မဟုတ်: D2 ဘက်တီးရီးယားအတုခရိုမိုဆုမ်း (BACs; Gong et al ။ , 2003; Valjent et al ။ , 2009; ထိုကဲ့သို့သော tetracycline-စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်သွေးဆောင် Transgene ကြွက် (၏အသုံးပြုမှုအဖြစ် gensat.org), ခြွင်းချက် mouse ကိုမော်ဒယ်များချန် et al ။ , 1998; Kelz et al ။ , 1999) နှင့် D ကို အသုံးပြု. Cre-recombinase ဖော်ပြ Transgene ကြွက်1 သို့မဟုတ်: D2 BACs, တဆေးအတုခရိုမိုဆုမ်း (YACs), သို့မဟုတ်ခေါက်-in ကိုကြွက် (Gong et al ။ , 2007; Lemberger et al ။ , 2007; Heusner et al ။ , 2008; Parkitna et al ။ , 2009; Valjent et al ။ , 2009; Bateup et al ။ , 2010; Lobo et al ။ , 2010; gensat.org) အဖြစ်ကောင်းစွာအဖြစ်ဆဲလ်-type အမျိုးအစား-တိကျတဲ့ဗိုင်းရပ်စ်-mediated ဗီဇလွှဲပြောင်း (Cardin et al ။ , 2010; Hikida et al ။ , 2010; Lobo et al ။ , 2010; ဖာဂူဆန် et al ။ , 2011), လေးနက်သစ်ကိုအသီးအသီး, MSN မျိုးကွဲများ၏တိကျသောမော်လီကျူးကျောထောက်နောက်ခံသို့ထိုးထွင်းသိမြင်မှုနှင့်အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများအားဖြင့်၎င်းတို့၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း (စားပွဲတင်ပေး 1).
စားပွဲတင် 1. : D ထဲမှာဆဲလ်-type အမျိုးအစား-သတ်သတ်မှတ်မှတ်မျိုးဗီဇခြယ်လှယ်၏ဆိုးကျိုးများ1+ နှင့် D ကို2မူးယစ်ဆေးစွဲမော်ဒယ်များအတွက် + MSNs.
မကြာသေးမီတွေ့ရှိချက် D ကိုတစ်ဦးထက်ပိုသောကြီးစိုးအခန်းကဏ္ဍ၏နိဂုံးကိုထောကျပံ့1အများဆုံးကြံ့ခိုင်မော်လီကျူးအပြောင်းအလဲများသောဤ MSNs အတွက်ဖြစ်ပေါ်အတူအလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများ၏အားဖြည့်ခြင်းနှင့်မလွဲမသွေအကျိုးသက်ရောက်ထုတ်လုပ် + MSNs ။ ဥပမာ, psychostimulants မှစူးရှသောထိတွေ့မှုအစွမ်းထက် FosB, ERK, က c-Fos နှင့်, D ကိုအတွက် Zif268 အပါအဝင်မြောက်မြားစွာအချက်ပြမော်လီကျူး induces1+ MSNs, ထပ်ခါတလဲလဲကင်းဦးစားΔFosB induces နှင့်အဖြစ်ကောင်းစွာဒီဆဲလ်-type အမျိုးအစားထဲမှာဂါဘမြို့သားအဲဒီ receptor နှင့်အခြားအိုင်းရုပ်သံလိုင်း subunits ပွောငျးလဲစဉ် (Robertson က et al ။ , 1991; လူငယ်တို့ et al ။ , 1991; Berretta et al ။ , 1992; Cenci et al ။ , 1992; Moratalla et al ။ , 1992; et al မျှော်လင့်ပါတယ်။ , 1994; Bertran-Gonzalez et al ။ , 2008; Heiman et al ။ , 2008) ။ ထို့အပွငျကမောက်ကမဖြစ်စေရန်သို့မဟုတ် Over-ဖော်ပြထိုကဲ့သို့သော: D အတွက်ΔFosB, DARPP-32, ဒါမှမဟုတ် Nr3c1 (ထို glucocorticoid အဲဒီ receptor), အဖြစ်သတ်သတ်မှတ်မှတ်မော်လီကျူး,1: D ထိုသို့သောဗီဇများလည်းပြတ်တောက်စဉ် + MSNs ပုံမှန်အားဖြင့်ဤပွောငျးလဲ non-ဆဲလ်-type အမျိုးအစား-တိကျတဲ့ထုံးစံ၌လုပ်သောအခါစောင့်ကြည့်လေ့လာမူးယစ်ဆေး-related အပြုအမူတွေကိုအတုယူ2+ MSNs မကြာခဏ (တစ်ခုဆန့်ကျင်ဘက်တုံ့ပြန်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်Fienberg et al ။ , 1998; Kelz et al ။ , 1999; Deroche-Gamonet et al ။ , 2003; Zachary et al ။ , 2006; Ambroggi et al ။ , 2009; Bateup et al ။ , 2010) ။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကျနော်တို့: D ၏အရေးပါသောအလှူငွေထွက်မအုပ်စိုးလို့မရဘူး2အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်အတွက် + MSNs, ကိုကင်းထိတွေ့မှုနှစ်ခုလုံးကို MSN ကို Subtype အတွက်မျိုးဗီဇစကားရပ်ပွောငျးလဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ (Heiman et al ။ , 2008) နှင့် D ကို2-receptor agonists နှင့်ရန် (အပြုအမူ assay အတွက်အစွမ်းထက်သက်ရောက်မှုကွိုးစားအားထုကိုယ်ပိုင်, 2010) ။ အမှန်စင်စစ်မကြာသေးမီတွေ့ရှိချက်: D အတွက်မော်လီကျူးအချက်ပြအလိုက်သင့်ပြောင်းလဲနေထိုင်ပြသ2+ MSNs အစွမ်းထက် (အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးတစ်ခုတိရိစ္ဆာန်ရဲ့အမူအကျင့်တုံ့ပြန်မှု modifyLobo et al ။ , 2010) ။ အဆုံးစွန်သောတွေ့ရှိချက်: D အတွက် TrkB ၏ဆုံးရှုံးမှု (BDNF များအတွက်အဲဒီ receptor) ပြသ2ပထမဦးဆုံးအကြိမ်: D အတွက်မော်လီကျူးလမ်းကြောင်းတစ်ခုရွေးချယ်ကြီးစိုးအခန်းကဏ္ဍဖေါ်ပြခြင်းတို့သည် NAc ထံမှစုစုပေါင်း TrkB နောက်ကောက်အဖြစ်ကိုကင်းအလားတူအပြုအမူတုံ့ပြန်မှုအတွက် + MSNs ရလဒ်များကို2အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများ၏သက်ရောက်မှုများဖြန်ဖြေအတွက် MSNs + ။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့မကြာသေးမီစာပေ: D ၏ဘယ်မှာ activation, နှစ်ခု MSNs မူးယစ်ဆေး-related အပြုအမူတွေအတွက်ရန်သက်ရောက်မှုကွိုးစားအားထုကြောင်းထုတ်ဖော်ပြသ1+ MSNs သို့မဟုတ်: D ၏တားစီး2+ MSNs (အလွဲသုံးစားမှုတစ်ဦးမူးယစ်ဆေးဝါးတစ်ခုတိရိစ္ဆာန်ရဲ့ sensitivity ပိုကောင်းစေပါတယ်Hikida et al ။ , 2010; Lobo et al ။ , 2010; ဖာဂူဆန် et al ။ , 2011) ။ ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက်နှစ်ခု MSNs ၏ဆန့်ကျင်အခန်းကဏ္ဍနှင့်မော်တာအပြုအမူတွေအတွက် Basal ganglia ၌မိမိတို့ကိုတိုက်ရိုက် vs. သွယ်ဝိုက်လမ်းကြောင်း (နှင့်ကိုက်ညီများမှာအလက်ဇန်းဒါး et al ။ , 1986; Albin et al ။ , 1989; Graybiel, 2000; Kravitz et al ။ , 2010) ။ ဒါဟာမကြာသေးခင်ကစာပေအလွဲသုံးစားမှုအားလုံးမူးယစ်ဆေးများက activated သော dopaminergic neurotransmission, D ကို၏ glutamatergic activation နိုင်အောင်စီစဉ်ပေးထားတယ်သောယေဘုယျစိတ်ကူးနှင့်အညီဖြစ်ပါသည်1+ MSNs: D ၏ glutamatergic activation ဟန့်တားနေစဉ်2: D အပေါ်လုပ်ရပ်များမှတဆင့် + MSNs1 : D vs.2 dopamine receptors (ပုံ 1) ။ ဤသုံးသပ်ချက်ကိုတှငျကြှနျုပျတို့အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများ၎င်းတို့၏အလုပ်လုပ်တဲ့အခန်းကဏ္ဍနှင့်တုံ့ပြန်မှုစပ်လျဉ်းတွင်ဤနှစ်ခု MSN ကို Subtype အားဖြင့်ပြသသည့်ကွဲပြားမော်လီကျူးအချက်ပြ၏လက်ရှိအသိပညာဖြေရှင်းရန်။
ပုံ 1 ။ differential နှစ်ခု MSN ကို Subtype အတွက် glutamatergic လှုပ်ရှားမှု modulate နိုင်သည့် striatum အတွက်အချက်ပြအလွဲသုံးစားမှုတိုး dopamine အားလုံးသည်မူးယစ်ဆေးဝါး,။ အထူးသဖြင့်, ကင်း VTA dopamine အာရုံခံများ၏ဆိပ်ကမ်းသို့ dopamine reuptake ကာကွယ်ပေးနိုင်သည့် dopamine သယ်ယူပို့ဆောင်ချည်နှောင်။ , G ၏ activations/olf coupled: D1 receptors PKA လှုပ်ရှားမှုပိုကောင်းစေပါတယ်နှင့် Ca ပွောငျးလဲ2+ နှင့်ငွေကျပ်+ ဤ MSNs တွင်အချိုမှုန်ကူးစက်သော“ up-state” ကိုတိုးမြှင့်စေရန်လုပ်ဆောင်မှု။ ဆနျ့ကငျြ, G ၏ activationi/Go D2-receptors PKA လှုပ်ရှားမှုမှေးမှိန်နှင့် Ca ပွောငျးလဲ2+, Na+နှင့်ငွေကျပ်+ ကမကထပြုခဲ့သည့်အချိုမှုလျော့ဖို့ conduction "ထ-ပြည်နယ်။ " ဒီနောက်ကျောကသူတို့သင်္ချိုင်းဤ MSNs ပြောင်းရွှေ့ရသည် "ချ-ပြည်နယ်။ "
: D အတွက် Dopamine receptor signal1 : D vs.2 MSNs
ပြီးသားမှတ်ချက်ပြုသကဲ့သို့, အလွဲသုံးစားမှုအားလုံးမူးယစ်ဆေးဝါး NAc နှင့်ဆက်စပ် limbic ဦးနှောက်ဒေသများ (ရန် dopaminergic input ကိုသက်ဝင်စေVolkow et al ။ , 2004; ပညာရှိ 2004; Nestler, 2005) ။ ဥပမာ, ထိုကဲ့သို့သော dopamine Transporter နှင့်အတူရောက်စွက်ဖက်ခြင်းဖြင့်ကိုကင်းဒါမှမဟုတ် dopaminergic ဆုလာဘ်လမ်းကြောင်းအပေါ်တိုက်ရိုက်စိတ်ကြွဆေးလုပ်ရပ်အဖြစ် psychostimulants: ကင်းလုပ်ကွက်သည့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်စိတ်ကြွဆေးသည့်ပို့ဆောင်ရေး, မြစ်အောက်ပိုင်း dopamine ကိုသက်ဝင်နိုင်သည့်အတွက် synapses အတွက် dopamine တစ်တည်ဆောက်ဖွင့်ထဲမှာရရှိလာတဲ့နှစ်ဦးစလုံးလုပ်ရပ်များနောက်ကြောင်းပြန် ပစ်မှတ်အာရုံခံအပေါ် receptors (ပုံ 1) ။ နှစ်ခု MSNs အရှိဆုံးအထူး D ကိုမိမိတို့သန့်စင်ခြင်းဖြင့်မတူညီကြသည်1 : D vs.2Single-ဆဲလ် RT ကို-PCR လေ့လာမှုများပေမယ့် -receptors: D ကြောင်းထုတ်ဖေါ်1+ MSNs သည့် D ၏အနိမ့်အဆင့်ဆင့်ကိုဖော်ပြ2-like အဲဒီ receptor, D ကို3 နဲ့ D2+ MSNs သည့် D ၏အနိမ့်အဆင့်ဆင့်ကိုဖော်ပြ1-like အဲဒီ receptor, D ကို5 (Surmeier et al ။ , 1996) ။ နှစ်ခု MSNs အာရုံကြောလှုပ်ရှားမှုမောင်းထုတ်ရန် glutamatergic innervation လိုအပ်; dopamine အတိုက်အခံကွဲပြား dopamine အဲဒီ receptor Subtype ၏ဆွကနေတဆင့်, ဤအလုပ်လုပ်တဲ့တုံ့ပြန်မှု modulates: အပြုသဘော: D မှတဆင့် excitatory glutamatergic input ကိုပြောင်းလဲပစ်အားဖြင့်1 , G မှတဆင့်ပြအဲဒီ receptors သို့မဟုတ်, Golf, dopamine အဆိုး D ကိုတဆင့်ဒီ input ကို modulates သော်လည်း, တိုးမြှင့ PKA လှုပ်ရှားမှုမှဦးဆောင် adenylyl cyclase လှုံ့ဆော်ပေးသော2, G မှတဆင့်ပြ -receptori နဲ့ Go အရာ PKA လှုပ်ရှားမှုလျော့နည်းသွားစေ adenylyl cyclase တားစီး (Surmeier et al ။ , 2007; Gerfen နှင့် Surmeier, 2011) ။ အဖြစ်မှန်မှာတော့တစ်ဦးချင်းစီအဲဒီ receptor အများအပြားထပ်တိုးမြစ်အောက်ပိုင်းအချက်ပြလမ်းကြောင်းအပေါ်ရှုပ်ထွေးသက်ရောက်မှုပြုပြင်။ ကြွင်းသောအရာမှာနှစ်ခု, MSN Subtype ယေဘုယျအား inhibited နေကြတယ်, သူတို့သုတေသီများချ-ပြည်နယ်ချေါအရာကို၌ရှိကြ၏။ Excitatory glutamatergic Synaptic လှုပ်ရှားမှုကဒီချ-ပြည်နယ်ကနေ MSNs လွှတ်ပေးရန်နှင့်တစ်ဦးထက်ပို depolarized ပြည်နယ် (အတက်-ပြည်နယ်) သို့သူတို့ကိုငါပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်။ Dopamine အတိုက်အခံပုတက်-ပြည်နယ်ဖို့ excitatory glutamatergic ပြောင်းကုန်ပြီ modulates ။ : D1 PKA ၏ activation Cav1 L-type ကို Ca ပိုကောင်းစေပါတယ်2+ ရုပ်သံလိုင်းလှုပ်ရှားမှု, somatic K သည်လျော့ကျ+ ရုပ်သံလိုင်းလှုပ်ရှားမှုနှင့် Cav2 Ca downregulates2+ Ca ၏ activation ထိန်းချုပ်လိုင်းများ2+ မှီခို, အသေးစား-conduction K သည်+ ဤအ MSNs အတွက်တိုးမြှင့် Spike အတွက်ရရှိလာတဲ့ (SK ကို) ချန်နယ်များကို, (Surmeier et al ။ , 2007; Gerfen နှင့် Surmeier, 2011) ။ ဆနျ့ကငျြ, D ကို2 အချက်ပြ Cav1 L-type ကို Ca ၏လျှော့ချရေးမှတဆင့်, အားဖြင့်တိုးမြှင့ Spike ကာကွယ်ပေးနိုင်သည်ကို up-ပြည်နယ်အကူးအပြောင်းဖြစ်စဉ်ကိုတားဆီးပေးပါတယ်2+ ရုပ်သံလိုင်းလှုပ်ရှားမှုနဲ့ Nav1 Na+ ရုပ်သံလိုင်းလှုပ်ရှားမှု K သည်တိုးပွားလာနေချိန်တွင်+ ရုပ်သံလိုင်းရေစီးကြောင်း (Surmeier et al ။ , 2007; Gerfen နှင့် Surmeier, 2011; ဂဏန်း 1) ။ နှစ်ခု MSNs ထိုသို့သောဆန့်ကျင်ဘက်ကိုပြောင်းလဲအလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများအားဖြင့်ရူးနှမ်းတိုးလာ dopamine အချက်ပြ D ကို၏ glutamatergic activation မြှင့်တင်ရန်သင့်ကြောင်းအကြံပြု1MSNs + နှင့် D ကို၏ glutamatergic activation လျှော့ချ2+ MSNs ။ အဖြစ်မှန်မှာတော့ထိုကဲ့သို့သောတုံ့ပြန်မှုညံ့ဖျင်းနားလည်သဘောပေါက်ကျန်ကြွင်းသောအကြောင်းပြချက်များအတွက် ပို. မတူညီကြပြီးရှုပ်ထွေးဖြစ်ကြသည်။ ဤခေါင်းစဉ်နောက်ထပ်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းပါလိမ့်မည်။
မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုအတွက် dopamine receptors ၏အခန်းကဏ္ဍကို (ရှုပ်ထွေးပြီးမကြာခဏတွေ့ရခဲသောဖြစ်ပါသည်ကိုယ်ပိုင်, 2010) ။ : D ၏အခန်းကဏ္ဍကိုအပေါ်စာပေတစ်ခုများစွာသောရှိပါတယ်1 နဲ့ D2-receptor အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးအကြိုးဂုဏ်သတ္တိများနှင့် Self-အုပ်ချုပ်ရေးပြောင်းလဲပစ်အတွက် agonists နှင့်ရန်သို့သော်ရလဒ်အသုံးပြုသော agonist / ရန်အမျိုးအစား, ဖြန့်ဝေအမျိုးအစား (ဦးနှောက်ဒေသ-တိကျတဲ့ vs. စနစ်တကျ), နှင့်အချိန်ကိုက်ပေါ် မူတည်. ကွာခြား (ကုသမှု၏ကိုယ်ပိုင်, 2010) ။ ထိုသို့သောရလဒ်များသည်နောက်ထပ်ထိုကဲ့သို့သော Pre-Synaptic: D များ၏အလှူငွေအဖြစ် Non-striatal တိကျတဲ့သက်ရောက်မှုကြောင့်အရှက်ကွဲလျက်2: D များ၏ VTA သို့မဟုတ်ထံတော်မှ -receptors1 များစွာသောအခြား limbic ဒေသများနှင့်အသုံးပြုသွားမည်အဆိုပါ agonists / ရန်၏တိကျသော၏မရှိခြင်းအဖြစ် D ကို၏ဟူသောအသုံးအနှုနျးအတွက် receptors1-like နဲ့ D2နှစ်ဦးစလုံး MSN ကို Subtype အတွက် receptors -like အစောပိုင်းကမှတ်ချက်ပြုသည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်ပြုလုပ် D ကိုထင်နေသည်1 receptors: D သော်လည်း, အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးအဓိကအကြိုးဂုဏ်သတ္တိများအတွက်တစ်ဦးထက်ပိုမြင်သာထင်သာအခန်းကဏ္ဍ2-receptors (ယန္တရားများရှာကြံမူးယစ်ဆေးအတွက်အခန်းကဏ္ဍကိုယ်ပိုင် et al ။ , 1996; ကိုယ်ပိုင်, 2010) ။ D နဲ့လေ့လာရေး1 အဲဒီ receptor နဲ့ D2-receptor နောက်ကောက်ကြွက်နှစ်ခု MSNs တွင်ဤ receptors ၏အခန်းကဏ္ဍကိုသို့အချို့သောထိုးထွင်းသိမြင်သည်။ : D1 တစ်ခုသွယ်ဝိုက်အတိုင်းအတာ - နောက်ကောက်ကြွက်တွေကိုကင်းတုံ့ပြန်ချက်ချင်းအစောပိုင်းမျိုးဗီဇတစ်ခုတုံးသော induction (IEGs) က c-Fos နှင့် Zif268, psychostimulant-သွေးဆောင် locomotor လုပ်ဆောင်မှုပေမယ်ကင်း-conditioning ရာအရပျ preference ကို (CPP က) တွင်အဘယ်သူမျှမပွောငျးလဲအတူလျော့နည်းသွားတုံ့ပြန်မှုကိုပြသ မူးယစ်ဆေးဆုလာဘ်များနှင့်လျော့နည်းသွားကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးနှင့်အီသနောစားသုံးမှု (မိုင်းလုပ်သား et al ။ , 1995; Drago et al ။ , 1996; ခရော et al ။ , 1997; el-Ghundi et al ။ , 1998; ကာဣန et al ။ , 2007) ။ : D2 နောက်ကောက်ကြွက် (opiates နှင့်ကိုကင်းဖို့လျော့နည်းသွားကြိုးသက်ရောက်မှုကိုပြသအဖြစ်အီသနောစားသုံးမှုပေမယ်ကင်းဆည်းပူးနေမလျော့ချရေးလျော့နည်းသွားMaldonado et al ။ , 1997; Cunningham et al ။ , 2000; မြင့်တက် et al ။ , 2000; ကာဣန et al ။ , 2002; Chausmer et al ။ , 2002; အဲလ် et al ။ , 2002; Welter et al ။ , 2007) ။ ထိုသို့သောဒေတာ: D များအတွက်အရေးကြီးသောအခန်းကဏ္ဍကိုထောကျပံ့1 နဲ့ D2မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးစားမှုမျိုးစုံရှုထောင့်ခုနှစ်နှစ်ဦးကို MSNs အတွက် -receptors ဤသို့တဦးတည်းကဤအပြုအမူဖြန်ဖြေအခြားဦးနှောက်ဒေသများနှင့်ဆဲလ်-အမျိုးအစားများနှင့်ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာအချက်များထွက်မအုပ်စိုးလို့မရဘူး, သို့သော်နောက်ကောက် striatal တိကျတဲ့ကင်းမဲ့နှင့်အစောပိုင်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ပေါ်ပေါက်ပါတယ်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့: D အဆင့်လျော့ကျ2/D3 striatum အတွက် receptors, ဦးနှောက်ပုံရိပ်များကမြင်အဖြစ်, (ရုပ်သိမ်းရေး၏ကာလအတွင်းမှာအထူးသဖြင့်လူ့လူနာအတွက်စွဲလမ်းတစ်ဘုံအမှတ်အသားဖြစ်လာခဲ့ပါသည်Volkow et al ။ , 2009) ။ : D ၏ဗိုင်းရပ်စ်-mediated ဗီဇလွှဲပြောင်းလက်ခံရရှိကြွက်2အဆိုပါ NAc display ကိုမှ -receptors (ကိုကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးနှင့်အီသနောစားသုံးမှု attenuatedThanos et al ။ , 2004, 2008) ။ ဒီလေ့လာမှုတွေကတစ်ဆဲလ်-type အမျိုးအစား-တိကျတဲ့ထုံးစံ၌ဖျော်ဖြေကြသည်မဟုတ်, ဒါကြောင့်ကျနော်တို့က D ရဲ့ဖြစ်နိုင်ချေအကျိုးသက်ရောက်မှုထွက်မအုပ်စိုးလို့မရဘူး2: D လွှမ်းမိုး -receptor overexpression1+ MSNs ။ ဒေတာဒီစုဆောင်းမှုပိုကောင်းမူးယစ်ဆေးစွဲထဲတွင်နှစ်ဦးကို MSN ကို Subtype ၎င်းတို့၏အလုပ်လုပ်တဲ့အခန်းကဏ္ဍ elucidate မှဆဲလ်-type အမျိုးအစား-တိကျတဲ့, ဒေသ-တိကျတဲ့အပါအဝင်ပိုပြီးရွေးချယ်ချဉ်းကပ်မှု, နှင့် dopamine receptors ပင်ယာယီသီးခြားထိန်းသိမ်းရေးပြောင်းရွှေ့ဖို့လိုအပ်ကြောင်းအလေးပေးဖော်ပြသည်။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့က: D ကြောင်းမကြာသေးမီကဖော်ပြခဲ့သည်ထားပြီး2-GFP homozygote BAC Transgene ကြွက် display ကိုပု D ကို၏စကားရပ်အဆင့်ဆင့်တိုးမြှင့်2striatum အတွက် -receptor နှင့် D ကိုမှအချက်ပြတိုးမြှင့်အပြုအမူ sensitivity ကိုနှင့် dopamine2 agonists ။ ထိုမှတပါး, homozygotes နှင့် hemizygotes နှစ်ဦးစလုံးကိုကင်းဖို့တုံးအမူအကျင့်တုံ့ပြန်မှုပြ (Kramer et al ။ , 2011) ။ ဒီလေ့လာမှုက: D ၏စေ့စေ့စပ်စပ်စရိုက်လက္ခဏာတွေလုပ်ဆောင်ရန်လိုအပ်ကြောင်းမီးမောင်းထိုးပြ1 နဲ့ D2 ချောင်းသတင်းထောက်နှင့် Cre ယာဉ်မောင်းလိုင်း။ သို့သော် Transgene ပေါင်းစည်းမှု၏ 5-10% ကတည်းကစံပြစမ်းသပ် genotype မဟုတ်သောအရာ homozygotes သုံးကဒီလေ့လာမှုမှာကောက်ခံအချက်အလက်များ၏အများစု (INSERT ဗီဇပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်ပေါ်Meisler, 1992); ထို့ကြောင့်ယင်း hemizygote genotype ပိုမိုယုံကြည်စိတ်ချရသောစမ်းသပ် genotype ဖြစ်ပါတယ်။ ထို့အပြင်ဤလေ့လာမှု littermate wildtype ထိန်းချုပ်မှုကိုသုံးပါဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့ Transgene လိုင်းများ GENSAT နှင့် MMRRC မှရရှိသောစဉ်တွင်, Taconic မှရရှိသောအလားတူနောက်ခံ (ဆွစ်ဇာလန် Webster) အပေါ်ထိန်းချုပ်မှုကိုသုံးခဲ့ပါဘူး။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့အခြားအုပ်စုတစ်စုကပုံမှန်ကင်း locomotor: D အတွက်အမူအကျင့်တုံ့ပြန်မှုပြသခဲ့သည်2-GFP hemizygotes (ကင်မ် et al ။ , 2011) ။ ထို့ကြောင့်သင့်လျော်သောထိန်းချုပ်မှုများနှင့်သင့်လျော်သော genotype သုံးပြီးအနာဂတ်လေ့လာမှုများအပြည့်အဝရရှိနိုင်အမျိုးမျိုးသောဆဲလ်-type အမျိုးအစား-တိကျတဲ့ Transgene လိုင်းများရဲ့အနှစ်သာရကမှဖျော်ဖြေရမည်ဖြစ်သည်။
: D ထဲမှာအချိုမှုများနှင့်ဂါဘမြို့သား signal1 : D vs.2 MSNs
အလတ်စား spiny အာရုံခံ prefrontal cortex, amygdala နှင့် hippocampus နှင့် GABAergic input ကိုဒေသခံ interneurons ကနေနှင့်အခြား MSNs ထံမှဖြစ်ကောင်းပေါင်ပစ္စည်းသွင်းအားစုများအပါအဝင်အများအပြားဟာဦးနှောက်ဒေသများထံမှ glutamatergic input ကိုလက်ခံရရှိသည်။ Net က excitatory နှင့် MSNs ၏ inhibitory စည်းမျဉ်းမူးယစ်ဆေး-စွဲပြည်နယ်ထိန်းညှိအတွက်အရေးကြီးသခြောဖြစ်ပြီး, အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများကို (NAc အတွက်အထူးသဖြင့် glutamatergic neurotransmission ပြောင်းလဲပစ်ထားတဲ့အတွက်ရှုပ်ထွေးတဲ့နည်းလမ်းတွေအပေါ်တစ်ဦးကြီးထွားလာစာပေယခုလည်းမရှိပီယပ် et al ။ , 1996; သောမတ်စ် et al ။ , 2001; Beurrier နှင့် Malenka, 2002; Kourrich et al ။ , 2007; Bachtell နှင့်ကိုယ်ပိုင်, 2008; Bachtell et al ။ , 2008; Conrad et al ။ , 2008; Kalivas, 2009; ဝံပုလွေ, 2010) ။ MSNs အဓိကအားနှစ်ဦးစလုံးဆဲလ်-အမျိုးအစားအချိုမှုမောင်းနှင်မှုလှုပ်ရှားမှုနှင့်အတူ Basal အခြေအနေများအောက်တွင်ချ-ပြည်နယ်တစ်ခုဘယျလိုမှမအတွက်တည်ရှိဖို့စဉ်းစားနေကြပေမယ့်, ကန့်သတ်သတင်းအချက်အလက် D ကိုဖြစ်ပေါ်ကွဲပြားစည်းမျဉ်းမှလေးစားမှုနှင့်အတူရှိဖြစ်နေဆဲ1 : D vs.2 MSNs ။
: D အတွက်ΔFosB overexpression1+ MSNs (အသေးစိတ်ကိုအောက်တွင်ကြည့်ပါ) ကို Ca ၏ကိုကင်းနှင့်အတိုးအဆင့်ဆင့်၏အကြိုးသက်ရောက်မှုကိုပိုကောင်းစေပါတယ်2+NAc အတွက် -impermeable အချိုမှု receptor subunit, GluR2 ။ ထို့ပြင် NAc မှ GluR2 ၏ဗိုင်းရပ်စ်-mediated ဗီဇလွှဲပြောင်းအလားတူ (ကိုကင်းများ၏အကြိုးသက်ရောက်မှုကိုပိုကောင်းစေပါတယ်Kelz et al ။ , 1999) ။ သို့ရာတွင်ထိုသို့ GluR2 ၏ induction: D အတွက်ΔFosB overexpression တုံ့ပြန်တွင်တွေ့မြင်ရှိမရှိမသိရ1ထို့ကြောင့်ကျနော်တို့မူးယစ်ဆုလာဘ်တွင်ဤနှစ်ခု MSNs အတွက် GluR2 function ကိုအကြောင်းကိုတိုက်ရိုက်ကောက်ချက်အခြမနိုင် + MSNs လည်းထိုအအာရုံခံမှတိကျတဲ့ဖြစ်ပြီး, GluR2 ၏ဗိုင်းရပ်စ် overexpression ဆဲလ်-type အမျိုးအစား-တိကျတဲ့မဟုတ်ပါဘူး။ Heusner နှင့် Palmiter (2005) ရွေးချယ် D ကိုအတွက်ကယ်လစီယမ် flux လျော့နည်းစေသောအပေါက်တစ် mutation ပါရှိသည်သည့် NR1 subunit, ဖော်ပြခြင်းဖြင့်ကိုကင်းအပြုအမူတွေအတွက် NMDA glutamatergic conduction ၏အခန်းကဏ္ဍကိုအကဲဖြတ်1+ MSNs ။ ဤအုပ်စု D ကိုအတွက် NMDA conduction ၏မရှိခြင်းပြသ1+ MSNs: D အတွက် NMDA အချက်ပြများအတွက်လိုအပ်ချက်မီးမောင်းထိုးပြ, ကိုကင်း-သွေးဆောင်ချင်းတိုးတက်ရေးပါတီနှင့်ကိုကင်း locomotor ာင်းကာကွယ်ပေးသည်1ကိုကင်းများ၏အကြိုးနှင့်မလွဲမသွေသက်ရောက်မှုများအတွက် + MSNs (Heusner နှင့် Palmiter, 2005) ။ ထို့အပြင်မကြာသေးမီကကြောင့်: D အတွက် NR1 subunit ထွက်ခေါက်ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါသည်1+ MSNs စိတ်ကြွဆေးာင်း attenuates နှင့်ဤ phenotype: D ဖို့ NR1 subunit resupplying အားဖြင့်ကယ်ဆယ်ခဲ့သည်1အထူး NAc အတွက် + MSNs (Beutler et al ။ , 2011) ။ အဆိုပါ mGluR5 subunit ၏နောက်ဆုံးအနေနဲ့ knockdown, D ကိုအတွက်, RNA ်ရောက်စွက်ဖက်ကို အသုံးပြု.1+ MSNs (ကိုကင်းများ၏ကနဦးအကြိုးဂုဏ်သတ္တိများအပေါ်မျှအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ရှာကြံကိုကင်းများ၏ cue-သွေးဆောင် reinstatement မှေးမှိန်Novak et al ။ , 2010) ။ ဤအဒေတာ: D အတွက် glutamatergic အချက်ပြဘို့ဆွဲဆောင်မှုအခန်းကဏ္ဍထုတ်ဖေါ်နေစဉ်1+ MSNs အနာဂတ်အလုပ် D ကိုအတွက် glutamatergic စနစ်များကိုလေ့လာဖို့လိုအပ်2+ MSNs ။ အနာဂတ်သုတေသနကိုလည်း (ထိုနှစ်ခု MSN ကို Subtype တွင်ဤအချိုမှု receptor subunits ၏မော်ဂျူအလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများပြီးနောက် NAc အတွက်စောင့်ကြည့်လေ့လာဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ Synaptic ပြောင်းလဲမှုများကိုအကျိုးသက်ရောက်ပုံကိုအကဲဖြတ်သင့်ပါတယ်Dietz et al ။ , 2009; Russo et al ။ , 2010), အထူးသဖြင့် dendritic ပွောငျးလဲသည့် D အတွက်ရွေးချယ်ကင်းထိတွေ့ပြီးနောက်လေ့လာတွေ့ရှိ1+ MSNs (Lee က et al ။ , 2006; ကင်မ် et al ။ , 2011): D လေ့လာသေးသေးလေး excitatory postsynaptic ရေစီးကြောင်းထဲမှာတိုးနဲ့ဆက်စပ်စေခြင်းငှါအရာ1+ MSNs (ကင်မ် et al ။ , 2011) ။ : D အတွက်စိတ်ဝင်စားစရာΔFosBသော induction1+ MSNs (နာတာရှည်ကင်းပြီးနောက်ထိုကဲ့သို့သော dendritic လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်တိုက်ရိုက် related ထားပြီးဝင်္ et al ။ , 2010).
အချိုမှုမှမတူဘဲ, အီသနောနှင့် benzodiazepines နှစ်ဦးစလုံးထည့်သွင်းစဉ်းစားအံ့သြစရာဖြစ်သောစွဲမော်ဒယ်များအတွက်နှစ်ခု MSNs အတွက်ဂါဘမြို့သား function ကိုအပေါ်သုတေသနတစ်ခုမရှိခြင်းရှိ၏ဂါဘမြို့သားများနှင့်နှစ်ခုကို MSNs ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများမြှင့်တင်ရန်အထက်တွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်းသိပ်သည်း GABAergic သွင်းအားစုလက်ခံရရှိသည်။ အနည်းဆုံးအားနာတာရှည်ကင်းထိတွေ့ပြီးနောက် NAc အတွက်တိုးမြှင့်တားစီးဖို့ညွှန်ပြစဉ်းစားဆင်ခြင်စရာသက်သေအထောက်အထား (လည်းရှိပါတယ်အဖြူရောင် et al ။ , 1995; လူမျိုး et al ။ , 1998; Zhang က et al ။ , 1998; သောမတ်စ် et al ။ , 2001; Beurrier နှင့် Malenka, 2002). Heiman et al ။ (2008) စိတ်ဝင်စားဖွယ်, ထို: D ထဲမှာအများဆုံးပြောင်းလဲဇီဝဖြစ်စဉ်ကိုနာတာရှည်ကင်းထိတွေ့ပြီးနောက်နှစ်ခု MSNs မြင့်မား throughput မျိုးရိုးဗီဇစိစစ်ဖျော်ဖြေခြင်းနှင့်1+ MSNs ဂါဘမြို့သားအချက်ပြခဲ့သည်။ အထူးသဖြင့်, ဂါဘမြို့သား၏အစွမ်းထက် upregulation ရှိခဲ့A အဲဒီ receptor subunits Gabra1 နှင့် Gabra4 အဖြစ်ဂါဘမြို့သားB အဲဒီ receptor subunit Gabrb3, ဤအုပ်စုသည်နာတာရှည်ကင်း D ကိုအတွက်သေးငယ်တဲ့-လွှဲခွင် GABAergic mini ကို inhibitory postsynaptic ရေစီးကြောင်း (mIPSCs) ၏ကြိမ်နှုန်းတိုးပွါးကြောင်းတွေ့ရှိရ1+ MSNs (Heiman et al ။ , 2008) ။ အခြားတစ်ဖက်တွင်နောက်ထပ်အုပ်စုတစုမကြာသေးမီက D1 + MSNs အတွက် mIPSCs ၏လျော့နည်းသွားအကြိမ်ရေများနှင့်လွှဲခွင်နဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်တုံ့ပြန်မှု (ထဲမှာနာတာရှည်ကင်းရလဒ်များကိုပြသကင်မ် et al ။ , 2011) ။ သို့သျောလညျးအဆုံးစွန်သောအုပ်စု D ကိုအတွက်အမြှေးပါးစိတ်လှုပ်ရှားပြပွဲလျော့ခဲ့ပါ1တိုးမြှင့်ဂါဘမြို့သားသေံတစ်ရောင်ပြန်ဟပ်မှုဖြစ်ခြင်းနှင့်နာတာရှည်ကင်းထိတွေ့ပြီးနောက် NAc အတွက်တိုးမြှင့်တားစီး၏လယ်ပြင်ရဲ့အကဲဖြတ်နှင့်ကိုက်ညီဖြစ်ပါသည်နိုင်သည့်နာတာရှည်ကင်းပြီးနောက် + MSNs ။ ထို့အပြင်ထိုအုပ်စုနှစ်စုအကြားထိုကဲ့သို့ကွဲပြားခြားနားမှုရိုးရှင်းစွာကိုကင်းထိတွေ့မှုနှင့်ဆုတ်ခွာ၏အချိန်ကိုက်ကြောင့်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ယေဘုယျအားဖြင့်နှစ်ခု MSNs အတွက် glutamatergic နှင့် GABAergic function ကိုလေ့လာဖို့လိုအပ်အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများတုံ့ပြန်ရှိသည်နှင့်လယ်ပြင်ယခုထိုကဲ့သို့သောဆဲလ်-type- နှင့်ဒေသ-တိကျတဲ့လေ့လာမှုဖြစ်နိုင်သောစေသောအရင်းမြစ်များတပ်ဆင်ထားသည်။
: D အခြား receptor signal1 : D vs.2 MSN ကို Subtype
နှစ်ခု MSNs differential dopamine receptors အပြင်တခြား, G-ပရိုတိန်း-coupled receptors အတွက်ကြွယ်ဝပြည့်စုံနေကြသည်။ : D1+ MSNs အဆိုပါ acetylcholine muscarinic အဲဒီ receptor4(M ၏အဆင့်မြင့်ဖော်ပြ4; ဘားနတ် et al ။ , 1992; Ince et al ။ , 1997) နှင့် D ကို2+ MSNs adenosine receptor 2A (ကနှစ်ဦးစလုံးအတွက်ကြွယ်ဝပြည့်စုံနေကြတယ်2A; Schiffmann et al ။ , 1991; Schiffmann နှင့် Vanderhaeghen, 1993) နဲ့ G-ပရိုတိန်း-coupled receptor6(Gpr6; Lobo et al ။ , 2007; gensat.org) ။ M က4 , G ဖို့ coupled ဖြစ်ပါတယ်I / O, D ကိုနှိုင်းယှဉ်တစ်ဦးဆန့်ကျင်ဘက်တုံ့ပြန်မှုထုတ်လုပ်မယ်လို့ထားတဲ့1 : D အတွက် receptors,1Camp / PKA လှုပ်ရှားမှုဟန့်တားသဖြင့် MSNs + ။ အမှန်စင်စစ်တစ်ဦး: D1+ MSN ကိုရွေးချယ် M က4 နောက်ကောက် (ကိုကင်းနှင့်အဖက်တမင်းမူးယစ်ဆေးဝါးမှပိုကောင်းအပြုအမူာင်းပြသJeon et al ။ , 2010) ။ ထို့ပြင်သီးသန့်တစ်ဒြပ်မူးယစ် (DREADDs) က activated တစ်ဒီဇိုင်နာအဲဒီ receptor သုံးပြီးမကြာသေးခင်လေ့လာမှု DREADD Gi / o-coupled လူ့ M က၏ activation ပြသ4 အဲဒီ receptor (hM4: D): D အတွက်1+ MSNs: D တွင်တွေ့မြင်ဆန့်ကျင်ဘက်တုံ့ပြန်မှုနှင့်အတူစိတ်ကြွဆေးမှအမူအကျင့်ာင်းလျော့2+ MSNs (ဖာဂူဆန် et al ။ , 2011) ။ ထိုသို့သောဒေတာ M က၏ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ခြင်းအခန်းကဏ္ဍထုတ်ဖေါ်4 : D အတွက် receptors1+ မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုအတွက် MSNs ။ အဖြစ်ကောင်းစွာ, အ hM ကတည်းက4: D အဲဒီ receptor အစွမ်းထက်သောဤ MSNs ဖြစ်စဉ်ကိုတားဆီးပေးပါတယ်, ဒေတာနောက်ထပ်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောဆွေးနွေးကြမည်သည့်မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုတွင်ဤနှစ်ခု MSNs ၏ပြောင်းလဲလုပ်ဆောင်မှုများ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုသို့ထိုးထွင်းသိမြင်သည်။
နှစ်ဦးစလုံးတစ်ဦးက2A နှင့် Gpr6 အပြုသဘော, G ဖို့ coupled နေကြတယ်s/Golf အဆိုပါ D ကို antagonizing ၎င်းတို့၏အခန်းကဏ္ဍ implicating ပရိုတိန်း,2: D အတွက် -receptor2+ MSNs ။ တစ်ဦးက၏ဧကန်စင်စစ်ဆွ2A receptors (ကိုကင်းအကဲဆတ်ခြင်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်စကားရပ်နှစ်ခုလုံးကိုလျှော့ချရန်ပြသထားသည်Filip et al ။ , 2006), (ကိုကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေး၏စတင်အယှက်Knapp et al ။ , 2001), နှင့်ကိုကင်းများကရူးနှမ်း, D ကိုရှာကြံကိုကင်းများ၏ reinstatement ဆန့်ကျင်ဘက်ပြု2-receptor ဆွ, ဒါမှမဟုတ်ကင်း-အေးစက်တွေကို (Bachtell နှင့်ကိုယ်ပိုင်, 2009) ။ Gpr6 လည်း D: ထဲမှာကြွယ်ဝပြည့်စုံသည်နည်းတူ,2+ MSNs (Lobo et al ။ , 2007), အ striatum ၏အမူအကျင့်လုပ်ဆောင်ချက်များကို၎င်း၏အခန်းကဏ္ဍကိုအကဲဖြတ်ရပါမည်။ ယနေ့အထိကြောင့် (ဆာသင်ယူမှုကိုသြဇာလွှမ်းမိုးရန်ပြသထားသည်Lobo et al ။ , 2007) ဒါပေမဲ့မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုမော်ဒယ်များအတွက်၎င်း၏အခန်းကဏ္ဍကိုသေးမသိနိုင်ပါဘူး။
အဆိုပါ cannabinoid အဲဒီ receptor 1 (CB1) (ဗဟိုအာရုံကြောစနစ်တစ်လျှောက်လုံးနေရာအနှံ့ထုတ်ဖော်ပြောဆိုဖြစ်ပါတယ်Mackie, 2008), ဤအရပ်ကΔ9-tetrahydrocannabinol (THC) စွဲဖြန်ဖြေအတွက်သတ်သတ်မှတ်မှတ်ဦးနှောက်ဒေသများနှင့်ဆဲလ်-အမျိုးအစားအတိအကျအခန်းကဏ္ဍခွဲစိတ်ရန်ခက်ခဲသည်။ : D ကနေ CB1 ၏မကြာသေးမီက deletion '1+ MSNs ကြိုးနှံစှာကျိုးသကဲ့သို့ဖြစ်ကြပါစေ THC-သွေးဆောင် hypolocomotion အတွက်ဆိုးကျိုးများ, hypothermia နှင့် analgesia အပါအဝင် THC မှအမူအကျင့်တုံ့ပြန်မှု, (အကျိုးသက်ရောက်စေရန်ရှာတွေ့ခဲ့သည်Monory et al ။ , 2007) ။ ဒါဟာ: D အတွက် cannabinoid အဲဒီ receptor function ကိုအကဲဖြတ်ဖို့စိတ်ဝင်စားဖို့ပါလိမ့်မယ်2+ MSNs သည်ဤ MSNs: D dopamine လိုအပ်ပါတယ်ရာ endocannabinoid-mediated ရေရှည်စိတ်ကျရောဂါ (ECB-, LTD), ကိုဖော်ပြပြီးကတည်းက2-receptor activation (Kreitzer နှင့် Malenka, 2007).
အဆိုပါ glucocorticoid အဲဒီ receptor, Nr3c1 လည်းကျယ်ပြန့်သည့် CNS နှင့်အစွန်အဖျားမှာရှိတဲ့ထုတ်ဖော်ပြောဆိုသည်။ စိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင် glucocorticoid လျှို့ဝှက်ချက် (မူးယစ်ဆေးစွဲအပါအဝင် maladaptive အပြုအမူတွေ potentiate နိုင်ပါတယ်ဖရန့် et al ။ , 2011) ။ အထူးသဖြင့်, D ကိုအတွက် glucocorticoid အချက်ပြကမောက်ကမဖြစ်စေရန်1Nr3c1 ဖျက်ခြင်းဖြင့် + MSNs သည်ဤကြွက် Self-စီမံခန့်ခွဲကင်းမှပြသ, ဤ Nr3c1 တစ်ခုလုံးကိုဦးနှောက် (ထံမှဖျက်ပစ်ခဲ့သည်ရှိရာယခင်ဒေတာတွေနဲ့ကိုက်ညီသည်လှုံ့ဆျောမှုလျော့Ambroggi et al ။ , 2009) ။ ဤရွေ့ကားဒေတာ: D တစ်ခုကြီးစိုးအခန်းကဏ္ဍဖေါ်ပြခြင်း, ဒီပြန်လည်သုံးသပ်မှာဖော်ပြထားတဲ့သည်အခြားတွေ့ရှိချက်များနှင့်ကိုက်ညီများမှာ1အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများ၏ဆိုးကျိုးများအများအပြားဖြန်ဖြေအတွက် MSNs + ။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျနော်တို့မကြာသေးမီကတစ်ခုချင်းစီကို MSN ကိုမျိုးကွဲထံမှရွေးချယ်ယင်း၏ TrkB အဲဒီ receptor ဖျက်ခြင်းဖြင့်နှစ်ခု MSNs အတွက်အချက်ပြ BDNF နှောင့်အယှက်။ ကိုကင်း-သွေးဆောင် locomotor လှုပ်ရှားမှုနဲ့ကိုကင်းချင်းတိုးတက်ရေးပါတီ၏ induction: D ကနေ TrkB ဖျက်မှုကိုအပြီးတိုးမြှင့်ခံခဲ့ရသည်: ကျနော်တို့ကိုကင်း-ရူးနှမ်းအပြုအမူတွေအပေါ်ဆန့်ကျင်ဘက်ဆိုးကျိုးများလေ့လာတွေ့ရှိ1+ MSNs, ဒါပေမယ့်: D ကနေပယ်ဖျက်ရေးအပြီး attenuated2+ MSNs (Lobo et al ။ , 2010) ။ : D ကနေ TrkB ၏စိတ်ဝင်စားစရာဖျက်ပစ်ခံရ2+ MSNs (ထို NAc ထံမှ TrkB စုစုပေါင်းပယ်ဖျက်ရေး၏သက်ရောက်မှုအဖြစ် VTA ကနေအချက်ပြ BDNF ၏နှောင့်အယှက်အတုယူHorger et al ။ , 1999; ဂရေဟမ် et al ။ , 2007, 2009; Bahi et al ။ , 2008; လူလိမ် et al ။ , 2010) ။ ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက်အရှင်ပထမဦးဆုံးအကြိမ်: D တစ်အချက်ပြအဆငျ့ဆငျ့၏ကြီးစိုးအခန်းကဏ္ဍပြသ2အလွဲသုံးစားမှုတစ်ဦးမူးယစ်ဆေးဝါး၏ဆိုးကျိုးများဖြန်ဖြေအတွက် MSNs + ။ : D များ၏မြင်သာထင်သာအခန်းကဏ္ဍ2ကိုကင်း-ရူးနှမ်းအပြုအမူတွေအပေါ် BDNF ရဲ့သက်ရောက်မှုဖြန်ဖြေအတွက် + MSNs TrkB mRNA နှင့်ပရိုတိန်းဓာတ်နှစ်မျိုးလုံးက D ထဲမှာကြွယ်ဝပြည့်စုံနေကြသည်စဉ်းစားအံ့သြစရာတော့မဟုတ်ပါဘူး2+ MSNs (Lobo et al ။ , 2010; Baydyuk et al ။ , 2011) ။ ဤအကြွက်တွေမှာလေ့လာတွေ့ရှိအဆိုပါအပြုအမူပြောင်းလဲမှု: D အတွက်ပိုကောင်းအာရုံခံလှုပ်ရှားမှုဖြင့်လိုက်ပါသွားခဲ့ကြသည်2TrkB တစ်ဦးရွေးချယ်နောက်ကောက်အပေါ်သို့ MSNs + ။ ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက် (အောက်တွင်ကြည့်ပါ) ရွေးချယ်ကင်းဆုလာဘ်အတွက် MSN ကိုလှုပ်ရှားမှု manipulate မှ optogenetic နည်းပညာသုံးစွဲဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုသတိပေးခံရ။
: D ထဲမှာကူးယူမှတ်တမ်းတင်အချက်များ1 : D vs.2 MSNs
: D များ၏ပိုပြီးကြံ့ခိုင်အခန်းကဏ္ဍများအတွက်အများဆုံးဆွဲဆောင်မှုသက်သေအထောက်အထား1မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးစားမှုများတွင် + MSNs intracellular အချက်ပြမော်လီကျူး၏စာပေအကဲဖြတ်သော induction ကနေလာပါတယ်။ အထက်တွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း psychostimulants ၏စူးရှသောဆေးများအဓိကအား: D အတွက်က c-Fos, Zif268 (Egr1), နှင့် FosB အပါအဝင် IEG စကားရပ်, သွေးဆောင်1NAc နှင့် dStr (မှာရှိတဲ့ + MSNsRobertson က et al ။ , 1991; လူငယ်တို့ et al ။ , 1991; Berretta et al ။ , 1992; Cenci et al ။ , 1992; Moratalla et al ။ , 1992; Bertran-Gonzalez et al ။ , 2008) ။ ဤသည်သော induction: D ၏ activation လိုအပ်ပါတယ်1 receptors နှင့်စူးရှသောကိုကင်းတုံ့ပြန်အတွက် IEG သော induction ၏ဆဲလ်-type အမျိုးအစား-specific မကြာသေးမီက D ကို အသုံးပြု. အတည်ပြုခဲ့သည်ခဲ့သည်1-GFP နဲ့ D2-GFP သတင်းထောက်ကြွက် (Bertran-Gonzalez et al ။ , 2008) ။ အဓိကအား: D အတွက်က c-Fos ၏ကိုကင်းရဲ့ induction ၏စိတ်ဝင်စားစရာအတည်ပြုချက်1: D အတွက်သေးငယ်တဲ့သော induction နှင့်အတူ striatum တစ်လျှောက်လုံး -GFP2သာ dStr အတွက် -GFP MSNs (ကြွက်တွေကသူတို့အိမ်ပြန်လှောင်အိမ်အပြင်ဘက်တွင်တစ်ဝတ္ထုပတ်ဝန်းကျင်တွင်ထိုးသွင်းခဲ့ကြ) context-မှီခိုပါရာဒိုင်းကိုအသုံးပြုပြီးအတည်ပြုခဲ့သည်ခဲ့သည်။ သုံးပြီးထို့ပြင်ယခင်လေ့လာမှု On-site ကို ကြွက်တွေမှာ Hybrid လည်း D: ထဲမှာက c-Fos ၏ induction ပြသ1+ နှင့် D ကို2dStr အတွက် + MSNs, ဒီလေ့လာမှုအတွက်ကိုယ်စားလှယ်ဘားဂရပ်များ: D ပိုမိုအရေအတွက်ကိုပြသပေမယ့်1+ c ကို-Fos အပြုသဘောအာရုံခံ (ဖာဂူဆန် et al ။ , 2006) ။ စိတ်ဝင်စားစရာကဒီလေ့လာမှု D ကိုသိသိသာသာတိုးမြှင့်က c-Fos သော induction ထုတ်ဖော်ပြသ2: D အတွက်တိုးမြှင့်က c-Fos သော induction ကျွန်တော်တို့ရဲ့တွေ့ရှိချက်မှုနဲ့အပြိုင်အရာ ERK1 ၏ဆုံးရှုံးမှုပြီးနောက် dStr အတွက် + MSNs2အထူးသ ERK လှုပ်ရှားမှုမြှင့်တင်ရန်လူသိများသော BDNF အချက်ပြ၏ပြတ်တောက်ပြီးနောက် NAc shell ကိုအတွက် + MSNs (Lobo et al ။ , 2010) ။ သို့သျောလညျးကိုကင်းဖို့ဆန့်ကျင်ဘက်အမူအကျင့်တုံ့ပြန်မှု: D အတွက်က c-Fos ၏ induction ရောင်ပြန်ဟပ်စေခြင်းငှါအရာ, အသီးအသီးလေ့လာမှုမှာလေ့လာတွေ့ရှိခဲ့ကြသည်2+ NAc shell ကို vs. dStr အတွက် MSNs ။ သုံးပြီးနောက်ဆုံးအနေနဲ့ယခင်စာပေ On-site ကို ကြွက်များတွင် Hybrid / immunohistochemistry (မူးယစ်ဆေးတစ်ခုဝတ္ထုပတ်ဝန်းကျင်၌ပေးသောအခါစူးရှ psychostimulants နှစ်ဦးစလုံး MSNs အတွက်ညီတူညီမျှက c-Fos သွေးဆောင်နိုင်ပါတယ်ပြသခဲ့သည်Badiani et al ။ , 1999; Uslaner et al ။ , 2001a,b; ဖာဂူဆန်နှင့်ရော်ဘင်ဆင်, 2004) နှင့်စိတ်ကြွဆေးများနာတာရှည်အုပ်ချုပ်ရေးရွေးချယ် D ကိုအတွက်က c-Fos သွေးဆောင်အစီရင်ခံနေသည်2+ MSNs (Mattson et al ။ , 2007) ။ ဤရွေ့ကားကွဲပြားခြားနားသောရလဒ်များကို (မသုံးစမ်းသပ်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများတစ်ရောင်ပြန်ဟပ်မှုဖြစ်နိုင်On-site ကို GFP သတင်းထောက်ကြွက် vs. Hybrid) သို့မဟုတ်ပင်ကြွက်အသုံးပြုသောအဆုံးစွန်သောစမ်းသပ်ချက်အဖြစ်အသုံးပြုတိရစ္ဆာန်မျိုးစိတ်ကြောင့်ဖြစ်လိမ့်မည်။
မကြာသေးမီကသုတေသီများဗီဇဟာကိုကင်းအခြေအနေတွင်-မှီခို profiled, က c-Fos immunolabeled ချောင်း activated ဆဲလ် sorting (FACS) ကို အသုံးပြု. ကြွက်များတွင်အာရုံခံ activated နှင့်က c-Fos + အာရုံခံတဲ့: D ထဲမှာကြွယ်ဝပြည့်စုံသည်ဟုပြသ1+ MSN ကိုဗီဇ, prodynorphin (Pdyn), ဒါပေမယ့်: D ၏အောက်ခြေအဆင့်ရှိ2 နှင့် A2Aနှစ်ခုစလုံး: D2+ MSN ကိုဗီဇ (Guez-ဘာဘာ et al ။ , 2011), အက c-Fos + activated အာရုံခံ D ကိုအဓိကထားရှိရေးကြောင်းအကြံပြု1+ MSNs ။ ထို့ပြင်ဤအုပ်စုသည်ယခင်ကဤအအာရုံခံ၏ ablation ဒီအမူအကျင့် phenotype (abolishes အဖြစ်က c-Fos ဖော်ပြ MSNs, ဤအခြေအနေတွင်-မှီခိုာင်းအရေးကြီးသောဖြစ်ကြောင်းပြသKoya et al ။ , 2009) ။ ယခင်ဒေတာက c-Fos ၏ကင်းအခြေအနေတွင်-မှီခိုသော induction နှစ်ဦးစလုံး D ကိုထဲတွင်ဖြစ်ပေါ်ကြောင်းပြသပေမယ့်1+ နှင့် D ကို2+ ကြွက်များတွင် MSNs, ပိုမကြာသေးမီရလဒ်များကိုအရာက c-Fos ၏ဖျက်မှုအတွက်ရွေးချယ် D ကိုကနေတွေ့ရှိချက်ကိုက်ညီတဲ့1+ MSNs (ကြွက်တွေမှာကင်း-သွေးဆောင် locomotor ာင်း bluntsZhang က et al ။ , 2006) ။ ထို့ပြင်ဤအုပ်စု D ကိုအတွက်က c-Fos ၏ဖျက်မှုကိုတွေ့ရှိရ1+ MSNs သည်ဤ Synaptic plasticity အပြောင်းအလဲများကိုဖြန်ဖြေအတွက်က c-Fos များအတွက်အခန်းကဏ္ဍညွှန်း, ပုံမှန်အားဖြင့်အဆိုပါ NAc အတွက်ကိုကင်းများကသွေးဆောင်အဆိုပါ dendritic ကျောရိုးအပြောင်းအလဲများကို blunts ။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့အုပ်စုကင်းချင်းတိုးတက်ရေးပါတီ၏ induction မပြောင်းလဲမှုကိုလေ့လာတွေ့ရှိပေမယ့် D ကိုအတွက်က c-Fos ၏ဆုံးရှုံးမှုကိုတွေ့1+ MSNs ကင်းချင်းတိုးတက်ရေးပါတီ၏မျိုးသုဉ်းတားဆီး။ ထိုသို့သောဒေတာ: D အတွက်က c-Fos သော induction များအတွက်ပြောင်းလဲနေသောအခန်းကဏ္ဍသရုပျဖျော1+ MSNs သို့သော်တ D ကိုဖော်ပြကြောင်းအခြား limbic ဦးနှောက်ဒေသများတွင်မဆိုကကမကထပြုခဲ့ခံအဖြစ်အမူအကျင့်အဆငျ့မှာ differential ကိုအကျိုးသက်ရောက်မှုများထွက်မအုပ်စိုးလို့မရဘူး1 အဲဒီ receptor ။
ကျယ်ပြန့်နှစ်ခု MSN ကို Subtype အတွက်ကိုလေ့လာခဲ့ပြီးအခြား IEG FosB ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုကင်းဖို့ acute ထိတွေ့: D အတွက် FosB induces1+ MSNs (Berretta et al ။ , 1992), နာတာရှည်ထိတွေ့ΔFosB, အခြားရွေးချယ်စရာ splicing ကနေထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ FosB ဗီဇတစ်ခုတည်ငြိမ်ထုတ်ကုန် (induces သော်လည်းet al မျှော်လင့်ပါတယ်။ , 1994; Nestler et al ။ , 2001; Nestler, 2008), D ကိုအတွက်1+ MSNs (Nye et al ။ , 1995; Moratalla et al ။ , 1996; Lee က et al ။ , 2006) ။ အလားတူတွေ့ရှိချက်အလွဲသုံးစားမှုများစွာသောအခြားမူးယစ်ဆေးဝါးများနှင့်ဝသကဲ့သို့ကောင်းစွာကဲ့သို့သောအစားအစာ, လိင်နှင့်ဘီးပြေးအဖြစ်သဘာဝကဆုလာဘ်နှင့်အတူကြည့်ရှုလေ့လာကြသည်။ ဥပမာအားဖြင့်သဘာဝဆုလာဘ်ဖြစ်သည့်, နာတာရှည်ဘီးပြေး, (Iversen, 1993; Belke, 1997; လက်တ et al ။ , 2000), D ကိုအတွက်ΔFosB induces1+ MSNs သော်လည်းမ: D2+ MSNs (Werme et al ။ , 2002) ။ နှစ်ခု MSNs အတွက်ΔFosB၏အခန်းကဏ္ဍကိုသို့အလုပ်လုပ်တဲ့ထိုးထွင်းသိမြင်မှုရဖို့, ငါတို့အုပ်စုကို NSE-tTa လိုင်းများထုတ်လုပ်ပြီး, 11A နှင့် 11B ချေါ, ဖြစ်စေ D ကိုမှ Transgene စကားရပ်ကိုညွှန်ကြားရာ1+ သို့မဟုတ်: D2အသီးသီး + MSNs, (ချန် et al ။ , 1998; Kelz et al ။ , 1999; Werme et al ။ , 2002) ။ 11A ကြွက်တစ်ဦး Tet-ကအေဲနျဂြီΔFosBလိုင်းပြပွဲနှင့်အတူဖြတ်ကျော် LINE (ကိုကင်းများ၏အကြိုးနှင့် locomotor သက်ရောက်မှုမှတုံ့ပြန်မှုတိုးလာKelz et al ။ , 1999), D ကိုအတွက်ΔFosBသော induction နှင့်ကိုက်ညီသောအရာ1+ MSNs (Nye et al ။ , 1995; Moratalla et al ။ , 1996) ။ အဆိုပါ 11B Tet-ကအေဲနျဂြီΔFosBကြွက်မော်ဖင်းအကိုက်ဆုလာဘ်မပြောင်းလဲမှုကိုပြသနေစဉ်ထို့အပြင်ဤတူညီတဲ့ကြွက် display ကို, (CPP ကအားဖြင့်အကဲဖြတ်) မော်ဖင်းအကိုက်ဆုလာဘ်အဖြစ်လျော့မော်ဖင်းအကိုက် analgesia နှင့်မြှင့်တင်ရန်မော်ဖင်းအကိုက်သည်းခံစိတ်တိုးတက်လာခဲ့သည်။ ဒီ mouse ကိုမော်ဒယ်: D ခွဲခြားမထားဘူးသော်လည်းΔFosBတစ်ဦးကြီးစိုးကအနုတ်ရန်၏ Overexpression, ΔFosBနှင့်မြင်သောသူတို့အားဆန့်ကျင်ဘက်ဆိုးကျိုးများပြုပြင်1 : D vs.2 MSNs (Peakman et al ။ , 2003) ။ အတူတူအဲဒီဒေတာနောက်ထပ်: D အတွက်ΔFosBသော induction ၏အခန်းကဏ္ဍကိုထောက်ခံပါသည်1အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများ၏အကြိုးဂုဏ်သတ္တိများ (အရေးပါတဲ့မော်လီကျူးကစားသမားအဖြစ် + MSNsZachary et al ။ , 2006) ။ ဤဖြစ်စဉ်အခြားဆုလာဘ်အပြုအမူတွေ, အထူးသဖြင့်, ဘီးပြေးလေ့လာတာဖြစ်ပါတယ်: 11B Tet-ကအေဲနျဂြီΔFosBကြွက်ပြေးလျော့နည်းသွားဘီးဖော်ပြရန်သော်လည်း 11A Tet-ကအေဲနျဂြီΔFosBကြွက် (တိုးလာဘီးပြေးအပြုအမူဖော်ပြရန်Werme et al ။ , 2002) ။ : D အတွက်တွေ့ရှိချက်ကြောင့်ΔFosBသော induction1 MSNs (ဆုလာဘ်ထိုကဲ့သို့သောဆဲလ်-type အမျိုးအစား-ရွေးချယ်သော induction လည်းနာတာရှည်စိတ်ဖိစီးမှုမှခံနိုင်ရည်တုံ့ပြန်မှုကိုအားပေးအားမြှောက်ကြောင်းမကြာသေးမီတွေ့ရှိချက်များနှင့်ကိုက်ညီဖြစ်ပါသည်အားပေးအားမြှောက်Vialou et al ။ , 2010) ။ : D အတွက်ΔFosB၏နောက်ဆုံးအနေနဲ့နာတာရှည်ကင်းသော induction1+ MSNs dendritic ကျောရိုးသိပ်သည်းဆကြံ့ခိုင်ရှည်တည်မြဲတိုး (ဖြင့်လိုက်ပါသွားခံရဖို့ပြသခဲ့သည်Lee က et al ။ , 2006) နှင့်မကြာသေးမီက NAc အတွက်ΔFosBဒီဦးနှောက်ဒေသတွင်း၌ dendritic ကျောရိုး၏တိုးလာသိပ်သည်းဆဖြန်ဖြေအတွက်လိုအပ်သောနှင့်လုံလောက်သောနှစ်ဦးစလုံးဖြစ်ပြခဲ့သည် (ဝင်္ et al ။ , 2010) ။ ထိုသို့သောဒေတာ: D အတွက်ΔFosBများအတွက်အခန်းကဏ္ဍကိုထောကျပံ့1+ အလွဲသုံးစားမှုနှင့်သဘာဆုလာဘ်၏မူးယစ်ဆေးဝါးများ၏အကြိုးရှုထောင့်အဖြစ်ပူးတှဲဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ plasticity အပြောင်းအလဲများကိုဖြန်ဖြေအတွက် MSNs ။ အဆိုပါဒေတာများကိုလည်း D: ထဲမှာΔFosB၏ induction အကြံပြု2+ MSNs လှုံ့ဆော်မှုဆုချီးမှအနုတ်လက္ခဏာအကျိုးဆက်များပေးအပ်။ : D အတွက်ΔFosBသော induction ကတည်းက2+ MSNs (နာတာရှည်စိတ်ဖိစီးမှုနှင့် antipsychotic မူးယစ်ဆေးထိတွေ့တုန့်ပြန်ရှုမြင်Hiroi နှင့် Graybiel, 1996; Perrotti et al ။ , 2004), အဆုံးစွန်သောလုပ်ရပ်များထပ်မံလေ့လာမှုများလိုအပ်နေပါသည်။
: D အခြား Intracellular signal molecules1 : D vs.2 MSNs
ကောင်းစွာမူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုများ၏အခြေအနေတွင်နှစ်ခု MSNs အတွက်ကိုလေ့လာခဲ့တစ်ခုမှာအချက်ပြမော်လီကျူးပရိုတိန်း kinase, ERK (extracellular signal ကို related kinase) ဖြစ်ပါသည်။ ကိုကင်းဖို့ acute သို့မဟုတ်နာတာရှည်ထိတွေ့: D အတွက် NAc နှင့် dStr အတွက် phosphorylated ERK (အခွင့်အရေး), ပရိုတိန်း၏ activated ပုံစံ induces1: D သုံးပြီး + MSNs1-GFP နဲ့ D2-GFP BAC Transgene သတင်းထောက်ကြွက် (Bertran-Gonzalez et al ။ , 2008) နှင့်ဤတုံ့ပြန်မှု: D မှတဆင့်ကမကထပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်1 receptors (Valjent et al ။ , 2000; lu et al ။ , 2006) ။ ဤအုပ်စုလည်း pMSK-1 ကြောင်း (phospho-MAP နှင့်စိတ်ဖိစီးမှု activated kinase-1) ပြ histone H3, အခွင့်အရေးအချက်ပြနှစ်ခုစလုံးပစ်မှတ်, စေ့စ့စပ်စပ်: D ်အခွင့်အရေးအတွက်သွေးဆောင်နေကြ1စူးရှသောကိုကင်းထိတွေ့မှုနှင့်ကြိုးနှံစှာပြီးနောက် + MSNs နာတာရှည်ကင်းပြီးနောက်တိုးမြှင့် (Bertran-Gonzalez et al ။ , 2008) ။ အခွင့်အရေးကိုလည်းသွေးဆောင်သည်ကိုအထူးသဖြင့်, အခွင့်အရေးစေ့စ့စပ်စပ်: D အတွက်သွေးဆောင်သည်နာတာရှည်မော်ဖင်းအကိုက်တုံ့ပြန်ဖြစ်ပါသည်1: D အတွက်သွေးဆောင်ကြိုးနှံစှာ + MSNs နှင့်2မော်ဖင်းအကိုက်နှင့်အတူဆက်စပ်-သတ်သတ်မှတ်မှတ်အသင်းအဖွဲ့မှတုန့်ပြန်ဆုတ်ခွာပြီးနောက် NAc shell ကိုအတွက် + MSNs (Borgkvist et al ။ , 2008) ။ မူးယစ်ဆေးစွဲအတွက်အခွင့်အရေးများ၏တိကျသောအလုပ်လုပ်တဲ့အခန်းကဏ္ဍဆုံးဖြတ်သည်ခံရဖို့နေဆဲဖြစ်သည်။ ERK inhibitors နှင့်အတူ Pharmacological ကုသမှုကိုကင်းဆုလာဘ်ကိုလျော့ချဖို့ပြသခဲ့ပြီး, သို့သော်, ERK1 တစ်နောက်ကောက် ERK inhibitors ဦးစား ERK2 ထိခိုက်စေခြင်းငှါအကြံပြုခြင်း, ကိုကင်းဆုလာဘ် potentiates ။ မကြာသေးခင်ကကျနော်တို့: D ၏ optogenetic activation ပြသ1ကိုကင်းဖို့တိရစ္ဆာန်ရဲ့အကြိုးတုံ့ပြန်မှုတိုးပွါးသော NAc အတွက် + MSNs, အစွမ်းထက် pERK1 နှင့် pERK2 နှစ်ဦးစလုံးလျော့ကျစေပါတယ်။ တစ်ဆဲလ်-type အမျိုးအစား-တိကျတဲ့ထုံးစံ၌ ERK စကားရပ်ကြိုးကိုင်အနာဂတ်လေ့လာမှုများအပြည့်အဝမူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုအတွက်နှစ်ခု MSNs အတွက် ERK အချက်ပြ၏အလုပ်လုပ်တဲ့အခန်းကဏ္ဍဖြေရှင်းရန်လိုအပ်သောဖြစ်ကြသည်။
DARPP-32 ကျယ်ကျယ်အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများတုံ့ပြန်ကိုလေ့လာခဲ့ပြီးအခြားအချက်ပြမော်လီကျူးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာကောင်းစွာစူးရှ psychostimulants အပါအဝင်ကြောင့်အများအပြား effector ပရိုတိန်း၏ phosphorylation ပြည်နယ်ထိန်းညှိပေးသောပရိုတိန်း phosphatase 32 (PP-34) ၏ inhibitor တစ်အစွမ်းထက်ဖြစ်လာဖို့ဖြစ်စေတဲ့, 34 (T1) threonine မှာ DARPP-1 ၏ PKA phosphorylation ဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြကြောင်းလူသိများသည် ကူးယူအချက်များ, ionotropic receptors နှင့်အိုင်းလိုင်းများ (Greengard et al ။ , 1999) ။ သို့သော်မကြာသေးမီကသည်အထိပြုလုပ် MSN ကိုမျိုးကွဲဒီထဲကဓာတုပစ်စညျးပြောင်းလဲမှု mediates ရာမရှင်းလင်းခဲ့သည်။ Greengard et al ။ (1999) : D အတွက် DARPP-32 phosphorylation ၏အကဲဖြတ်ကို enable ပြုလုပ်နေထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ BAC Transgene mouse ကိုမော်ဒယ်များ1+ သို့မဟုတ်: D2+ ဖော်ပြခြင်းဖြင့် MSNs D ကို အသုံးပြု. DARPP-32 ဗားရှင်း tagged1 သို့မဟုတ်: D2 တစ်ခုချင်းစီကို MSN ကိုမျိုးကွဲထံမှ DARPP-32 ၏ immunoprecipitative ဘို့ခွင့်ပြု BACs ။ ဒီလေ့လာမှုတွေကစူးရှသောကိုကင်းကုသမှု: D အတွက် T34 phosphorylation တိုးပွါးကြောင်းသရုပ်ပြ1+ MSNs နှင့်ရွေးချယ် D ကိုအတွက်, PKA အချက်ပြဖြစ်စဉ်ကိုတားဆီးပေးပါတယ်ရာ Cdk75 က threonine 75 (T5) ၏ phosphorylation induces2+ MSNs (Bateup et al ။ , 2008) ။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဒီအုပ်စုတစ်စုချင်းစီ MSN ကိုမျိုးကွဲထံမှ DARPP-32 ၏ deletion 'D ကိုသုံးပြီးကြောင်းပြသ1-Cre နဲ့ D2ကိုကင်း-သွေးဆောင် locomotor လှုပ်ရှားမှု၏ဆန့်ကျင်ဘက်စည်းမျဉ်းထဲမှာ -Cre BAC Transgene ကြွက်ရလဒ်များကို (Bateup et al ။ , 2010) ။ : D ကနေ DARPP-32 ဆုံးရှုံး1+ MSNs (ကစုစုပေါင်း DARPP-32 နောက်ကောက်အကဲဖြတ်ယခင်ဒေတာအတုယူသောကိုကင်းများ၏ locomotor ဆိုးကျိုးများလျော့Fienberg et al ။ , 1998), D ကိုကနေ DARPP-32 ဆုံးရှုံးသော်လည်း2+ MSNs ကင်း locomotor တုံ့ပြန်မှုတိုးမြှင့်။ ထိုသို့သောဒေတာအလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများတုံ့ပြန်နှစ်ခု MSNs အတွက် DARPP-32 ၏ differential ကိုအခန်းကဏ္ဍများအတွက်ကွန်ကရစ်သက်သေအထောက်အထားများကိုအပြည့်အဝမူးယစ်ဆေးစွဲတွင်ဤနှစ်ခုတွင် neuron အမျိုးအစားများ၏အလှူငွေကိုနားလည်သဘောပေါက်ရန်ဆဲလ်-type အမျိုးအစား-တိကျတဲ့နည်းလမ်းများ၏အရေးပါမှုကိုဖျောပွ။
: D ၏ Module လှုပ်ရှားမှု1 သို့မဟုတ်: D2 MSNs
တိုက်ရိုက်နှစ်ခု MSN ကို Subtype ၏လုပ်ဆောင်မှုကိုမကြာသေးမီက: D များ၏မော်လီကျူးများနှင့်အလုပ်လုပ်တဲ့အခန်းကဏ္ဍသို့ဝတ္ထုထိုးထွင်းသိမြင်ပေးထားပြောင်းလဲပစ်1 နဲ့ D2 စွဲလမ်းအတွက် MSNs ။ ကျနော်တို့အပြာအလင်း-activated စုံလုံရုပ်သံလိုင်း, channelrhodopsin-2 (ChR2) ဖော်ပြတဲ့ conditional (ဆိုလိုသည်မှာ Cre-မှီခို) adeno-ဆက်စပ်ဗိုင်းရပ်စ် (AAV) vector နဲ့ပေါင်းစပ် optogenetic tools တွေကိုအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။ ကျနော်တို့: D များ၏ NAc သို့, ထိုအားနည်းချက်ကို, ဒါမှမဟုတ်တစ်ဦးကိုထိန်းချုပ်ထိုးသွင်း1-Cre သို့မဟုတ်: D2ထို့နောက် -Cre BAC Transgene ကြွက်နှင့်ရွေးချယ် D ကို activate လုပ်ဖို့အပြာအလင်းနှင့်အတူထိုးသွင်းဒေသနှိုးဆွပေး1+ D နဲ့ vs.2+ ကိုကင်းချင်းတိုးတက်ရေးပါတီ၏အခြေအနေတွင် MSNs ။ ကျနော်တို့: D ၏ activation ကိုတွေ့1+ MSNs: D ၏ activation သော်လည်း, ကိုကင်းချင်းတိုးတက်ရေးပါတီ၏ induction potentiates2+ MSNs (ဒီ induction ဖြစ်စဉ်ကိုတားဆီးပေးပါတယ်Lobo et al ။ , 2010) ။ ယခင်ကဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း TrkB သည်ဤ MSN ကို Subtype ကနေရွေးချယ်ဖျက်ပစ်သောအခါ, ငါတို့အတူတူအမူအကျင့်အပေါ်သက်ရောက်မှုများလေ့လာတွေ့ရှိ: တိုးမြှင့်ကင်းချင်းတိုးတက်ရေးပါတီနှင့် locomotor လှုပ်ရှားမှု: D ကနေ TrkB ကိုပယ်ဖျက်ပြီးနောက်1+ MSNs နှင့် D ကိုကနေ TrkB ဖျက်မှုကိုအပြီးကိုကင်းချင်းတိုးတက်ရေးပါတီနှင့် locomotor လှုပ်ရှားမှုလျှော့ချ2+ MSNs ။ : D အတွက် TrkB နောက်ကောက်နှင့် optogenetic ဆွ၏ဖွယ်ရှိဘုံအရေးယူ2ဤအဆဲလ်ကနေ TrkB ၏ဖျက်မှုကိုသူတို့ရဲ့လျှပ်စစ်စိတ်လှုပ်ရှားတိုးပွါးကတည်းက + MSNs, သူတို့ရဲ့တိုးချဲ့လှုပ်ရှားမှုဖြစ်ပါတယ်။ အစောပိုင်းကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းငါတို့သည်လည်း D: ကနေ TrkB ကိုပယ်ဖျက်ပြီးနောက်အခွင့်အရေးတစ်ခုကြံ့ခိုင်လျှော့ချရေးကိုတွေ့1+ MSNs ။ အခွင့်အရေး BDNF အချက်ပြတဲ့လူသိများမြစ်အောက်ပိုင်းပစ်မှတ်ဖြစ်ပါသည်, ထို့ကြောင့်ယင်း shared အမူအကျင့်အပေါ်သက်ရောက်မှုများ: D ကနေ TrkB ဖျက်မှုကိုအပြီးလေ့လာတွေ့ရှိ1+ MSNs နှင့်ဤဆဲလ် optogenetic activation ထံမှအခွင့်အရေးလှုပ်ရှားမှုအပေါ်သက်ရောက်မှုဆုံမှုကြောင့်ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ သို့သော်အနာဂတ်အလုပ် BDNF အချက်ပြနှင့်ဤနှစ်ခုတွင် neuron Subtype ၏ optogenetic ထိန်းချုပ်မှုပြတ်တောက်ပြီးနောက်မြင်အပြုအမူသက်ရောက်မှုအုပ်ချုပ်သောတိကျသော, shared မော်လီကျူးကျောထောက်နောက်ခံပြုဆုံးဖြတ်ရန်လိုအပ်သည်။
အခြားအုပ်စုများမူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုမော်ဒယ်များအတွက်နှစ်ခု MSNs ၏လှုပ်ရှားမှု modulate မှကွဲပြားခြားနားသော tools တွေကိုအသုံးပြုခဲ့ကြပါပြီ။ Hikida et al ။ (2010) ပစ္စည်းဥစ္စာ P ကို ​​(က D ကို အသုံးပြု. tetracycline-ဖိနှိပ်ကူးယူအချက် (tTa) ထုတ်ဖော်ပြောဆိုဖို့အသုံး AAV virus သယ်ဆောင်1+ MSN ကိုဗီဇ) သို့မဟုတ် enkephalin (က: D2MSN ကိုဗီဇ) ဖြစ်မြောက်ရေး + ။ ရွေးချယ်တစ်ဦးချင်းစီအတွက် Synaptic ဂီယာများကိုဖျက်ပယ်ခြင်းငှါ, tetracycline-တုံ့ပြန်မှုဒြပ်စင်များကထိန်းချုပ်ထားခဲ့သည် - ၌မှီဝဲအဆိုပါ Synaptic တွေ့နေကျမဟုတ်သောအ-ဆက်စပ်ပရိုတိန်း, VAMP2 တဲ့ဘက်တီးရီးယားအဆိပ်အတောက် - ဤ virus သယ်ဆောင်ရသောမေးခိုင်အဆိပ်အတောက်အလင်းကွင်းဆက် (TN) ကြွက်များ၏ NAc သို့ထိုးသွင်းခဲ့ကြ MSN ကိုမျိုးကွဲ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ optogenetic ချဉ်းကပ်မှုနှင့်အတူတသမတ်တည်းအဲဒီဒေတာ: D တစ်အခန်းကဏ္ဍပြသ1: D အတွက် Synaptic ဂီယာဖျက်သိမ်းခြင်းကတည်းကကင်း CPP ကအဖြစ်ကိုကင်း-သွေးဆောင် locomotor လှုပ်ရှားမှုတိုးမြှင့်အတွက် + MSN ကိုလှုပ်ရှားမှု1+ MSNs နှစ်ဦးစလုံးအမူအကျင့်အပေါ်သက်ရောက်မှုများလျော့။ အဆိုပါ optogenetic လေ့လာမှုများမတူဘဲခုနှစ်, စာရေးသူ: D အတွက် Synaptic ဂီယာဖျက်သိမ်းခြင်းပြီးနောက်ကင်း CPP ကမပွောငျးလဲတွေ့ရှိခဲ့2+ MSNs, ဒါပေမယ့်ပထမဦးဆုံးနှစ်ဦးကိုကိုကင်းထိတွေ့မှုမှတုန့်ပြန်လျှော့ကင်း-သွေးဆောင် locomotor လှုပ်ရှားမှုစောငျ့ရှောကျခဲ့တယျ။ စိတ်ဝင်စားစရာကဒီအုပ်စု D ကို၏ inactivation ပြသ2+ MSNs ဆန္ဒရှိအပြုအမူတွေကိုဖြန်ဖြေအတွက်ပိုပြီးလေးနက်အခန်းကဏ္ဍမှပါဝင်ခဲ့သည်။
အစောပိုင်းကဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း ဖာဂူဆန် et al ။ (2011) တစ်ဦးအင်ဂျင်နီယာ GPCR (က, G ထုတ်ဖော်ပြောဆိုဖို့ရေယုန် simplex virus ကို (HSV) virus သယ်ဆောင်အသုံးပြုခဲ့I / Oလူ့ muscarinic M က -coupled4 သီးသန့်တစ်ဦးဒီဇိုင်နာမူးယစ်ဆေး, hM အားဖြင့် activated ဒီဇိုင်နာအဲဒီ receptor4: D) ရွေးချယ် D ကိုနှုတ်ပိတ်ဖို့ enkephalin နှင့် dynorphin ဖြစ်မြောက်ရေးကို အသုံးပြု. တစ်ခုမဟုတ်ရင် pharmacologically အစွမ်းမဲ့ ligand အားဖြင့် activated ကြောင်း1+ သို့မဟုတ်: D2+ ပု dStr အတွက် MSNs ။ အဆိုပါစာရေးဆရာယာယီ D ကိုနှောင့်ယှက်ကြောင်းပြသ2dStr အတွက် + MSN ကိုလှုပ်ရှားမှု: D ၏စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်လျော့ကျလာသော်လည်း, စိတ်ကြွဆေးာင်း facilitated1+ MSNs စိတ်ကြွဆေး-သွေးဆောင်အကဲဆတ်ခြင်းဇွဲချို့ယွင်း။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ D ကိုဖျက်သိမ်းခြင်း2diptheria အဆိပ်အတောက်အဲဒီ receptor ကို အသုံးပြု. အရွယ်ရောက်ပြီးသူအသက်အရွယ်မှာ NAc အတွက် + MSNs (စိတ်ကြွဆေး၏အကျိုးသက်ရောက်မှုပိုကောင်းစေပါတယ်Durieux et al ။ , 2009) ။ ထိုသို့သော data တွေကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ optogenetic တွေ့ရှိချက်များနှင့်အညီဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, အတူတကွ: D ၏ဆန့်ကျင်ဘက်အခန်းကဏ္ဍ ဆက်စပ်. အ1+ D နဲ့ vs.2D နဲ့မူးယစ်ဆေးစွဲထဲမှာ + MSNs,1psychostimulants နှင့် D ကိုမှဆုလာဘ်များနှင့်အထိခိုက်မခံတုံ့ပြန်မှုနှစ်ဦးစလုံးမြှင့်တင် + MSNs2ဤအအပြုအမူတွေ dampening + MSNs ။
အဆိုပါလယ်: D များ၏ရွေးချယ်အခန်းကဏ္ဍနားလည်သဘောပေါက်ဆီသို့ကြီးမားတဲ့တိုးတက်မှုဖန်ဆင်းတော်မူပြီ1+ နှင့် D ကို2အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများ၏သက်ရောက်မှုများဖြန်ဖြေအတွက် NAc နှင့် dStr အတွက် MSN ကို Subtype + ။ အထူးသဖြင့်အဲဒီဆဲလ်-အမျိုးအစားများရွေးချယ်ခြယ်လှယ်ကို enable ပြုလုပ်မကြာသေးမီကတီထွင် tools များဤအချက်အလက်များ၏အများစုရယူအတွက်မြင်သာထင်သာအခန်းကဏ္ဍကပါပွီ။ လာမယ့်ခြေလှမ်းများကဘာတွေလဲ? မူးယစ်ဆေးစွဲမော်ဒယ်များအတွက်နောက်ခံမော်လီကျူးအလိုက်သင့်ပြောင်းလဲနေထိုင်ငြိမ်, ဒါပေမယ့်အလွန်ပြောင်းလဲနေသောမဟုတ်ကတည်းကကြောင့်ရွေးချယ် D ကိုစိတ်ဝင်စားကြောင်း၏မော်လီကျူးများပြ manipulate ဖို့စွမ်းရည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အလွန်အရေးပါသည်1+ D နဲ့ vs.2+ ဟာယာယီတိကျသောလမ်းအတွက် MSNs ။ DREADDs နှင့် optogenetic tools များဤအချိန်အတိုင်းအတာခြယ်လှယ်နှင့်အတူကူညီနိုင်သည်။ DREADD ligands မူးယစ်ဆေးမော်ဒယ်များအတွက်နှစ်ခု MSNs အတွက် receptors အချက်ပြ၏ရွေးချယ်အခန်းကဏ္ဍမှထွက်ကှကျဖို့မူးယစ်ဆေးဝါးအမူအကျင့် Paradigm တစ်လျှောက်လုံးကွဲပြားခြားနားသောအချိန်သင်တန်းများမှာအုပ်ချုပ်နိုင်ပါသည်။ အထူးသဖြင့် Optogenetic tools တွေကိုယာယီ OptoXRs သုံးပြီးအာရုံခံလှုပ်ရှားမှုပေမယ့်, G-ပရိုတိန်း-coupled receptor အချက်ပြသာထိန်းညှိဖို့အလွန်အစွမ်းထက်နည်းလမ်းသည် (Airan et al ။ , 2009), glutamatergic အချက်ပြ (Volgraf et al ။ , 2006; Numano et al ။ , 2009), (GABAergic အချက်ပြများနှင့်ပင်အချို့သော intracellular မော်လီကျူးများအချက်ပြဝူ et al ။ , 2009; Hahn နှင့် Kuhlman, 2010) ။ နောက်ဆုံးတွင်ကမှတ်တမ်းလှုပ်ရှားမှု optogenetic စည်းမျဉ်းဤစွမ်းရည်တိုးချဲ့ဖို့ဖြစ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ အလားတူပင် optogenetic tools တွေကိုဖြစ်နိုင်တိကျတဲ့သွင်းအားစု၏လွှမ်းမိုးမှုလေ့လာဖို့ပထမဦးဆုံးအကြိမ် striatum ရန်နှင့်ဤကဲ့သို့သောသွင်းအားစု: D အပေါ်ရွေးချယ်နည်းလမ်း impinge ရှိမရှိဆုံးဖြတ်ရန်အဘို့လုပ်နေပါတယ်1+ D နဲ့ vs.2+ MSNs (Higley နှင့် Sabatini, 2010) ။ အချိန်ကိုသင်တန်းနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးအမျိုးမျိုးအဆင့်ဖြန်ဖြေအတွက်အကြီးအယာယီ resolution နဲ့ထိုကဲ့သို့သောအချက်ပြခြင်းနှင့်မော်လီကျူးဂုဏ်သတ္တိများကိုထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်းကိုအဓိကခြေလှမ်းများနှစ်ခု MSN ကို Subtype တစ်ဦးထက်ပိုသောပြည့်စုံသောနားလည်မှုဆီသို့လုပ်ခံရဖို့ခွင့်ပြုလိမ့်မည်ဟုနှင့် NAc နှင့် dStr အခြားဆဲလ် Subtype, စွဲလမ်း။
Airan, RD, Thompson က KR, Fenno, LE, Bernstein, အိပ်ချ်, နှင့် Deisseroth, K. (2009) ။ intracellular အချက်ပြ၏ Vivo ထိန်းချုပ်ယာယီတိကျသော။ သဘာဝ 458, 1025-1029 ။
Albin, RL, လူငယ်, AB နှင့် Penney, JB- (1989) ။ Basal ganglia မမှန်များ၏အလုပ်လုပ်တဲ့ခန္ဓာဗေဒ။ ခေတ်ရေစီးကြောင်း neuroscience ။ 12, 366-375 ။
အလက်ဇန်းဒါး, GE, Delong, MR နှင့် Strick, PL (1986) ။ Basal ganglia နှင့် cortex ချိတ်ဆက် function အသားအရောင်ခွဲခြားဆားကစ်၏စင်ပြိုင်အဖွဲ့အစည်းက။ Annu ။ ဗျာ neuroscience ။ 9, 357-381 ။
Ambroggi, အက်ဖ်, Turiault, အမ်, Milet, အေ, Deroche-Gamonet, V. , Parnaudeau, အက်စ်, Balado, အီး, Barik, ဂျေ, ဗန် Der Veen, R. , Maroteaux, G. အ, Lemberger , တီ, Schutz, G. အ, Lazar, အမ်, Marinelli, အမ်, Piazza, PV နှင့် Tronche, အက်ဖ် (2009) ။ စိတ်ဖိစီးမှုများနှင့်စွဲ: dopaminoceptive အာရုံခံအတွက် glucocorticoid အဲဒီ receptor ကိုကင်းရှာနိုင်အောင်စီစဉ်ပေးထားတယ်။ နတ်။ neuroscience ။ 12, 247-249 ။
Bachtell, RK, Choi, KH, Simmons, DL, စွန်ငှက်, အီး, Monteggia, LM, Neve, RL နှင့်ကိုယ်ပိုင်, DW (2008) ။ နျူကလိယအတွက် GluR1 စကားရပ်၏အခန်းက္ပကိုကင်းထိခိုက်စေကင်း-ရှာအပြုအမူအတွက်အာရုံခံ accumbens ။ အီးယူအာရ်။ ဂျေ neuroscience ။ 27, 2229-2240 ။
Bachtell, RK နှင့်ကိုယ်ပိုင်, DW (2008) ။ သက်တမ်းတိုးကင်းထိတွေ့နျူကလိယအတွက်ယာယီပြောင်းလဲထုတ်လုပ် AMPA အဲဒီ receptor-mediated အပြုအမူ accumbens ။ ဂျေ neuroscience ။ 28, 12808-12814 ။
Bachtell, RK နှင့်ကိုယ်ပိုင်, DW (2009) ။ ကြွက်များတွင်ကင်း-ရှာကြံအပြုအမူအပေါ် adenosine A2A အဲဒီ receptor ဆွ၏ဆိုးကျိုးများ။ Psychopharmacology (Berl ။ ) 206, 469-478 ။
Badiani, အေ, Oates, MM, နေ့, HE, Watson, SJ, Akil, အိပ်ချ်, နှင့်ရော်ဘင်ဆင်, TE (1999) ။ D1 striatal အာရုံခံနှိုင်းယှဉ် D2 အတွက်စိတ်ကြွဆေး-သွေးဆောင်က c-fos ထုတ်ဖော်ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးမော်ဂျူ။ ပြုမူနေ။ ဦးနှောက် Res ။ 103, 203-209 ။
Bahi, အေ, Boyer, အက်ဖ်, Chandrasekar, V. နှင့် Dreyer, JL (2008) ။ ကိုကင်း-သွေးဆောင် psychomotor sensitive ကအေးစက်အရပ်ကို preference ကိုများနှင့်ကြွက်များအတွက် reinstatement အတွက် accumbens BDNF နှင့် TrkB ၏အခန်းက္ပ။ Psychopharmacology (Berl ။ ) 199, 169-182 ။
Bateup, HS, Santini, အီး, Shen, ဒဗလျူ, Birnbaum, အက်စ်, Valjent, အီး, Surmeier, DJ သမား, Fisone, G. အ, Nestler, EJ နှင့် Greengard, P. (2010) ။ အလတ်စား spiny အာရုံခံ၏ကွဲပြား subclasses differential striatal မော်တာအပြုအမူတွေကိုထိန်းညှိ။ proc ။ Natl ။ Acad ။ သိပ္ပံ။ ယူအက်စ်အေ 107, 14845-14850 ။
Bateup, HS, Svenningsson, P. , Kuroiwa, အမ်, Gong, အက်စ်, Nishi, အေ, Heintz, N. နှင့် Greengard, P. (2008) ။ psychostimulant နှင့် antipsychotic မူးယစ်ဆေးဝါးများအားဖြင့် DARPP-32 phosphorylation ၏ဆဲလ်အမျိုးအစား-တိကျတဲ့စည်းမျဉ်း။ နတ်။ neuroscience ။ 11, 932-939 ။
Baydyuk, အမ်, ငုယင်, MT နှင့် Xu, ခ (2011) ။ TrkB အချက်ပြ၏နာတာရှည်ဆင်းရဲချို့တဲ့နှောင်းပိုင်းတွင်-စတင်ခြင်း nigrostriatal dopaminergic ယိုယွင်း selective စေပါတယ်။ Exp ။ Neurol ။ 228, 118-125 ။
Belke, TW (1997) ။ အပြေးပြီး run ဖို့အခွင့်အလမ်းအားဖြင့်အားဖြည့်တုံ့ပြန်: စစ်ကူကြာချိန်၏အကျိုးသက်ရောက်မှု။ ဂျေ Exp ။ စအို။ ပြုမူနေ။ 67, 337-351 ။
ဘားနတ်, V. , Normand, အီးများနှင့် Bloch, ခ (1992) ။ muscarinic အဲဒီ receptor ဗီဇဖော်ပြကြွက် striatal အာရုံခံ၏ Phenotypical စရိုက်လက္ခဏာတွေ။ ဂျေ neuroscience ။ 12, 3591-3600 ။
Berretta, အက်စ်, Robertson က HA နှင့် Graybiel, Am (1992) ။ Dopamine နှင့်အချိုမှု agonists အဆိုပါ striatum အတွက် Fos တူသောပရိုတိန်း၏အာရုံခံဆဲလျ-တိကျတဲ့စကားရပ်လှုံ့ဆော်ခြင်း။ ဂျေ Neurophysiol ။ 68, 767-777 ။
Bertran-Gonzalez, ဂျေ, Bosch ရဲ့, C တို့, Maroteaux, အမ်, Matamales, အမ်, Herve, ဃ, Valjent, အီးများနှင့် Girault ဂျေအေ (2008) ။ ကိုကင်းနှင့်အ haloperidol တုံ့ပြန် dopamine D1 နှင့် D2 အဲဒီ receptor-ဖော်ပြ striatal အာရုံခံအတွက် activation အချက်ပြ၏ဆန့်ကျင်ပုံစံများ။ ဂျေ neuroscience ။ 28, 5671-5685 ။
Beurrier, C တို့နှင့် Malenka, RC (2002) ။ ကိုကင်းရန်အမူအကျင့်ာင်းစဉ်အတွင်းနျူကလိယ accumbens အတွက် dopamine အားဖြင့် Synaptic ဂီယာ၏ Enhanced တားစီး။ ဂျေ neuroscience ။ 22, 5817-5822 ။
Beutler, LR, Wanat, MJ, မစ္စတာကင်တားနား, အေ, Sanz, အီး, Bamford, NS, Zweifel, LS နှင့် Palmiter, RD (2011) ။ dopamine D1 အဲဒီ receptor (D1R) တွင်ဟန်ချက်ညီ NMDA အဲဒီ receptor လှုပ်ရှားမှု - နှင့် D2R-ဖော်ပြအလတ်စား spiny အာရုံခံစိတ်ကြွဆေးာင်းလိုအပ်ပါသည်။ proc ။ Natl ။ Acad ။ သိပ္ပံ။ ယူအက်စ်အေ 108, 4206-4211 ။
Borgkvist, အေ, Valjent, အီး, Santini, အီး, Herve, ဃ, Girault, ဂျာနှင့် Fisone, G. အ (2008) ။ မော်ဖင်းအကိုက်-sensitized ကြွက်တွေမှာ ERK ၏နှောင့်နှေး, context- နှင့် dopamine D1 အဲဒီ receptor-မှီခို activation ။ Neuropharmacology 55, 230-237 ။
ကာဣန SB, Negus, အက်စ်အက်စ်, Mello, NK, Patel က, အက်စ်, Bristow, အယ်လ်, Kulagowski, ဂျေ, Vallone, ဃ, Saiardi, အေနှင့် Borrelli, အီး (2002) ။ D2 အဲဒီ receptor Mutant ကြွက်နှင့်ဝတ္ထု D2 အဲဒီ receptor ရန်နှင့်အတူလေ့လာမှုများ: ကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးအတွက် dopamine D2 ကဲ့သို့ receptors ၏အခန်းက္ပ။ ဂျေ neuroscience ။ 22, 2977-2988 ။
ကာဣန SB, Thomsen, အမ်, ဂါဗြေလ, KI, Berkowitz, JS, ရွှေစင်, LH, Koob, gf, Tonegawa ကအက်စ်, Zhang က, ဂျေနှင့် Xu, အမ် (2007) ။ dopamine D1 အဲဒီ receptor ခေါက်ထွက်ကြွက်တွေမှာကင်း၏ Self-အုပ်ချုပ်မှုမရှိခြင်း။ ဂျေ neuroscience ။ 27, 13140-13150 ။
Cardin, ဂျာ Carlen, အမ်, Meletis, K. , Knoblich, U. , Zhang က, အက်ဖ်, Deisseroth, K. , Tsai, LH နှင့် Moore က, CI (2010) ။ channelrhodopsin-2 ၏ဆဲလ်-type အမျိုးအစား-တိကျတဲ့စကားရပ်ကိုသုံးပြီး Vivo အတွက်အာရုံခံ၏ optogenetic ဆွနှင့်အသံဖမ်းပစ်မှတ်ထား။ နတ်။ Protoc ။ 5, 247-254 ။
Cenci MA, ကမ့်ဘဲလ်, K. , Wictorin, K. နှင့် Bjorklund, အေ (1992) ။ ကိုကင်းသို့မဟုတ် apomorphine အားဖြင့် Striatal က c-fos သော induction ကြွက်များတွင် substantia nigra မှထုတ်လုပ်တဲ့ output ကိုအာရုံခံအတွက်ဦးစားတွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ အီးယူအာရ်။ ဂျေ neuroscience ။ 4, 376-380 ။
Chausmer, AL, အဲလ်, GI, Rubinstein, အမ်, အနိမျ့, MJ, ယူဆပါတယ်, DK နှင့် Katz, JL (2002) ။ ကိုကင်း-သွေးဆောင် locomotor လှုပ်ရှားမှုနဲ့ dopamine D2 အဲဒီ receptor Mutant ကြွက်တွေမှာကင်းခွဲခြားဆက်ဆံမှု။ Psychopharmacology (Berl ။ ) 163, 54-61 ။
Chen ကဂျေ, Kelz, ကို MB, Zeng, G. အ, Sakai က, N. , Steffen, C တို့, Shockett, PE, Picciotto, MR, Duman, RS, နှင့် Nestler, EJ (1998) ။ ဦးနှောက်ထဲမှာသွေးဆောင်, ပစ်မှတ်ထားဗီဇစကားရပ်နှင့်အတူ Transgene တိရိစ္ဆာန်များ။ Mol ။ Pharmacol ။ 54, 495-503 ။
Conrad, KL, Tseng, KY, Uejima, JL, Reimers, JM, Heng, LJ, Shaham, Y. , Marinelli, အမ်နှင့် Wolf က, ME (2008) ။ accumbens GluR2-ချို့တဲ့ AMPA receptors ၏ဖွဲ့စည်းခြင်းကိုကင်းတဏှာ၏ပေါက်ဖွား mediates ။ သဘာဝ 454, 118-121 ။
ခရော,, CA, Drago, ဂျေ, Watson, JB နှင့် Levine, က MS (1997) ။ အဆိုပါ dopamine D1A-လစ်လပ် mouse ကို၏ locomotor လှုပ်ရှားမှုအပေါ်ထပ်ခါတလဲလဲစိတ်ကြွဆေးကုသမှုဆိုးကျိုးများ။ Neuroreport 8, 2523-2527 ။
လူလိမ်, KR, Kleven, ၎င်းကို, Rodriguiz, RM, Wetsel, WC နှင့် Mcnamara, Jo (2010) ။ TrkB အချက်ပြအပြုအမူအာရုံခံစားမှုနှင့်ကိုကင်းများ၏တစ်ခုတည်းသောဆေးထိုးခြင်းဖြင့်သွေးဆောင် conditional ရာအရပျ preference ကိုလိုအပ်ပါသည်။ Neuropharmacology 58, 1067-1077 ။
Cunningham, CL, Howard MA, Gill, SJ, Rubinstein, အမ်, အနိမျ့, MJ နှင့်ယူဆပါတယ်, DK (2000) ။ အီသနော-conditioning ရာအရပျ preference ကို dopamine D2 အဲဒီ receptor-လစ်လပ်ကြွက်များတွင်လျှော့ချဖြစ်ပါတယ်။ Pharmacol ။ ထဲကဓာတုပစ်စညျး။ ပြုမူနေ။ 67, 693-699 ။
Deroche-Gamonet, V. , Sillaber, ဗြဲ, Aouizerate, ခ, Izawa, R. , Jaber, အမ်, Ghozland, အက်စ်, Kellendonk, C တို့, က Le Moal, အမ်, Spanagel, R. , Schutz, G. အ, Tronche, အက်ဖ်နှင့် Piazza, PV (2003) ။ ကိုကင်းအလွဲသုံးစားမှုလျှော့ချဖို့အလားအလာပစ်မှတ်အဖြစ် glucocorticoid အဲဒီ receptor ။ ဂျေ neuroscience ။ 23, 4785-4790 ။
Dietz, DM, Dietz, KC, Nestler, EJ နှင့် Russo, SJ (2009) ။ psychostimulant-သွေးဆောင်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ plasticity ၏မော်လီကျူးယန္တရားများ။ Pharmacopsychiatry 42 (ပျော့ပျောင်း။ 1), S69-S78 ။
Drago, ဂျေ, Gerfen, CR, Westphal, အိပ်ချ်, နှင့် Steiner, အိပ်ချ် (1996) ။ D1 dopamine အဲဒီ receptor-လစ်လပ် mouse ကို: အ striatum အတွက်ချက်ချင်း-အစောပိုင်းမျိုးဗီဇများနှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာ P ကိုထုတ်ဖော်ကင်း-သွေးဆောင်စည်းမျဉ်း။ neuroscience 74, 813-823 ။
Durieux, PF, Bearzatto, ခ, Guiducci, အက်စ်, Buch, တီ, Waisman, အေ, Zoli, အမ်, Schiffmann, SN နှင့် De Kerchove က D'Exaerde, အေ (2009) ။ D2R striatopallidal အာရုံခံ locomotor နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးဆုလာဘ်ဖြစ်စဉ်များနှစ်ဦးစလုံးတားစီး။ နတ်။ neuroscience ။ 12, 393-395 ။
el-Ghundi, အမ်, ဂျော့ခ်ျ, SR, Drago, ဂျေ, ဖလက်ချာ, PJ, ဝါသနာရှင်, တီ, ငုယင်, တီ, လျူ, C တို့, Sibley, DR, Westphal, အိပ်ချ်, နှင့် O'Dowd, BF (1998) ။ dopamine ၏နှောင့်အယှက် D1 receptor မျိုးရိုးဗီဇစကားရပ်အရက်-ရှာကြံအပြုအမူ attenuates ။ အီးယူအာရ်။ ဂျေ Pharmacol ။ 353, 149-158 ။
အဲလ်, GI, Pieper, Jo, Rubinstein, အမ်, အနိမျ့, MJ, ယူဆပါတယ်, DK နှင့်ပညာရှိ, RA (2002) ။ dopamine D2 အဲဒီ receptor ခေါက်ထွက်ကြွက်များတွင်ထိရောက်သောဆာပစစ်ကူအဖြစ်အစေခံရန်သွေးကြောသွင်းမော်ဖင်းအကိုက်ပျက်ကွက်။ ဂျေ neuroscience ။ 22, RC224 ။
ဖာဂူဆန်, SM, Eskenazi, ဃ, Ishikawa, အမ်, Wanat, MJ Phillips, PE, Dong, Y. , Roth, BL နှင့် Neumaier, JF (2011) ။ ယာယီအာရုံခံတားစီးာင်းအတွက်သွယ်ဝိုက်နှင့်တိုက်ရိုက်လမ်းကြောင်း၏အခန်းကဏ္ဍဆန့်ကျင်ဖော်ပြသည်။ နတ်။ neuroscience ။ 14, 22-24 ။
ဖာဂူဆန်, SM, Fasano, အက်စ်, ယန်, P. , Brambilla, R. နှင့်ရော်ဘင်ဆင်, TE (2006) ။ ERK1 ၏နောက်ကောက်ကင်း-evoked ချက်ချင်းအစောပိုင်းဗီဇစကားရပ်နှင့်အမူအကျင့် plasticity ပိုကောင်းစေပါတယ်။ Neuropsychopharmacology 31, 2660-2668 ။
ဖာဂူဆန်, SM နှင့်ရော်ဘင်ဆင်, TE (2004) ။ striatopallidal အာရုံခံအတွက်ဖက်တမင်းဆေးပြား-evoked ဗီဇစကားရပ်: corticostriatal afferents နေဖြင့်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းနှင့်အ ERK / MAPK အချက်ပြအဆငျ့ဆငျ့။ ဂျေ Neurochem ။ 91, 337-348 ။
Fienberg, AA ကို, Hiroi, N. , Mermelstein, PG, သီချင်း, ဒဗလျူ, Snyder, GL, Nishi, အေ, Cheramy, အေ, O'Callaghan, JP, Miller က DB, ကိုးလ်, DG, Corbett, R. , မိုးသီး, CN, Cooper က, DC က, Onn, SP, တော်ကကျေးဇူး, AA ကို, Ouimet, CC ကို, အဖြူရောင်, FJ, Hyman, SE, Surmeier, DJ သမား, Girault, ဂျေ, Nestler, EJ နှင့် Greengard, P. (1998) ။ DARPP-32: dopaminergic neurotransmission များ၏ထိရောက်မှု၏ထိန်းညှိ။ သိပ္ပံ 281, 838-842 ။
Filip, အမ်, Frankowska, အမ်, Zaniewska, အမ်, Przegalinski, အီး, Muller, အီး, Agnati, အယ်လ်, ပြင်သစ်, R. , ရောဘတ်, DC ကများနှင့် Fuxe, K. (2006) ။ အဆိုပါ locomotor နှင့်ကိုကင်းများ၏အထိခိုက်မခံဆိုးကျိုးများအတွက် adenosine A2A နှင့် dopamine receptors ၏ပါဝင်ပတ်သက်မှု။ ဦးနှောက် Res ။ 1077, 67-80 ။
ဖရန့်, MG, Watkins, LR နှင့် Maier, SF (2011) ။ အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများမှစိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင်အားနည်းချက်များ၏အလားအလာယန္တရားများ: neuroinflammatory တုံ့ပြန်မှု၏ Stress- နှင့် glucocorticoid-သွေးဆောင် Prime ။ ဦးနှောက်ပြုမူနေ။ ကိုယ်ခံစွမ်းအား။ 25, S21-S28 ။
Gerfen, CR (1984) ။ အဆိုပါ neostriatal mosaic: corticostriatal input ကိုနှင့် striatonigral output ကိုစနစ်များ compartmentalization ။ သဘာဝ 311, 461-464 ။
Gerfen, CR (1992) ။ အဆိုပါ neostriatal mosaic: အ Basal ganglia အတွက် compartmental အဖွဲ့အစည်းမျိုးစုံအဆင့်ဆင့်။ Annu ။ ဗျာ neuroscience ။ 15, 285-320 ။
Gerfen, CR, Engber, TM, မာဟန်, LC, Susel, Z. , Chase, TN, Monsma, FJ ဂျူနီယာနှင့် Sibley, DR (1990) ။ D1 နှင့် D2 striatonigral နှင့် striatopallidal အာရုံခံ၏ dopamine အဲဒီ receptor-စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ဗီဇစကားရပ်။ သိပ္ပံ 250, 1429-1432 ။
Gerfen, CR နှင့် Surmeier, DJ သမား (2011) ။ dopamine အားဖြင့် striatal projection စနစ်များ Modulation ။ Annu ။ ဗျာ neuroscience ။ 34, 441-466 ။
Gerfen, CR နှင့်လူငယ်တို့, WS III ကို။ (1988) ။ နှစ်ဦးစလုံး patch ကိုနှင့် matrix ကိုအခန်းအတွက် striatonigral နှင့် striatopallidal peptidergic အာရုံခံ၏ဖြန့်ဖြူး: တစ်ခု situ အတွက် Hybrid histochemistry နှင့်လေ့လာမှု tracing ချောင်း retrograde ။ ဦးနှောက် Res ။ 460, 161-167 ။
Gong, အက်စ်, Doughty, အမ်, Harbaugh, CR, တတ်, အေ, Hatten, ME, Heintz, N. နှင့် Gerfen, CR (2007) ။ ဘက်တီးရီးယားအတုခရိုမိုဆုန်းဆောက်လုပ်ရေးနှင့်အတူသီးခြားအာရုံခံဆဲလျလူဦးရေမှ Cre recombinase ပစ်မှတ်ထား။ ဂျေ neuroscience ။ 27, 9817-9823 ။
Gong, အက်စ်, Zheng, C တို့, Doughty, ML, Losos, K. , Didkovsky, N. , Schambra, UB, Nowak, NJ, Joyner, အေ, Leblanc, G. အ, Hatten, ME နှင့် Heintz, N ကို ။ (2003) ။ ဘက်တီးရီးယားအတုခရိုမိုဆုမ်းအပေါ်အခြေခံပြီးဗဟိုဦးနှောက်အာရုံကြောစနစ်၏အဖြေမျိုးဗီဇစကားရပ် Atlas ။ သဘာဝ 425, 917-925 ။
ဂရေဟမ်, DL, Edwards က, အက်စ်, Bachtell, RK, Dileone, RJ, Rios, အမ်နှင့်ကိုယ်ပိုင်, DW (2007) ။ ကိုကင်းသုံးစွဲခြင်းနှင့်အတူနျူကလိယ accumbens အတွက် dynamic BDNF လှုပ်ရှားမှု Self-အုပ်ချုပ်ရေးနှင့် relapse တိုးပွားစေပါသည်။ နတ်။ neuroscience ။ 10, 1029-1037 ။
ဂရေဟမ်, DL, Krishnan, V. , Larson, eb, ဂရေဟမ်, အေ, Edwards က, အက်စ်, Bachtell, RK, Simmons, ဃ, Genting, LM, Berton, O. , Bolanos,, CA, Dileone, RJ, Parada , LF, Nestler, EJ နှင့်ကိုယ်ပိုင်, DW (2009) ။ အဆိုပါ mesolimbic dopamine စနစ် Tropomyosin-related kinase B ကို: ကိုကင်းဆုလာဘ်အပေါ်ဒေသ-တိကျတဲ့ဆိုးကျိုးများ။ Biol ။ စိတ်ရောဂါကုသမှု 65, 696-701 ။
Graybiel, Am (2000) ။ အဆိုပါ Basal ganglia ။ Curr ။ Biol ။ 10, R509-R511 ။
Greengard, P. , Allen က, PB နှင့် Nairn, AC အ (1999) ။ အဆိုပါ DARPP-32 / ပရိုတိန်း phosphatase-1 အဆငျ့ဆငျ့: အ dopamine အဲဒီ receptor ကျော်လွန်ပြီး။ အာရုံခံဆဲလျ 23, 435-447 ။
Guez-ဘာဘာ, ဃ, Fanous, အက်စ်, ရွှေ, SA, Schrama, R. , Koya, အီး, Stern ပာ, AL, Bossert, JM, Harvey, ကယ်, Picciotto, MR နှင့်မျှော်လင့်ခြင်း, BT (2011) ။ FACS ရွေးချယ် activated အရွယ်ရောက်ပြီးသူ striatal အာရုံခံအတွက်ထူးခြားတဲ့ကင်း-သွေးဆောင်ဗီဇစည်းမျဉ်းသတ်မှတ်။ ဂျေ neuroscience ။ 31, 4251-4259 ။
Hahn, KM နှင့် Kuhlman, ခ (2010) ။ တင်းကျပ်စွာ LOV ငါ့ကိုကိုင်ထားပါ။ နတ်။ နည်းလမ်းများ 7, 595-597 ။
Heiman, အမ်, Schaefer, အေ, Gong, အက်စ်, Peterson, JD, နေ့, အမ်, ရမ်းဆေး, Ke, ဆွာရက်ဇ်-Farina, အမ်, Schwarz, C တို့, Stephan, DA, Surmeier, DJ သမား, Greengard, P. နှင့် Heintz, N. (2008) ။ CNS ဆဲလ်အမျိုးအစားမော်လီကျူးစရိုက်လက္ခဏာတွေအဘို့ဘာသာကိုချဉ်းကပ်။ ကလာပ်စည်း 135, 738-748 ။
Heusner, CL, Beutler, LR, Houser, CR နှင့် Palmiter, RD (2008) ။ ဆဲလ်ဖော်ပြ dopamine အဲဒီ receptor-67 အတွက် GAD1 ၏ပယ်ဖျက်ခြင်းတိကျတဲ့မော်တာလိုငွေပြမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ကမ်ဘာဦး 46, 357-367 ။
Heusner, CL နှင့် Palmiter, RD (2005) ။ dopamine D1 အဲဒီ receptor ပါဝင်သောဆဲလ်တွေမှာရှိတဲ့ Mutant NMDA receptors ၏ expression ကိုကင်းာင်းကာကွယ်ပေးသည်။ ဂျေ neuroscience ။ 25, 6651-6657 ။
Higley, MJ နှင့် Sabatini, BL (2010) ။ D2 dopamine နဲ့ A2A adenosine receptors အားဖြင့် Synaptic Ca2 + ရောက်လာ၏ယှဉ်ပြိုင်မှုစည်းမျဉ်း။ နတ်။ neuroscience ။ 13, 958-966 ။
Hikida, တီ, Kimura, K. , Wada, N. , Funabiki, K. နှင့် Nakanishi, အက်စ် (2010) ။ ဆုချမှတိုက်ရိုက်နှင့်သွယ်ဝိုက် striatal လမ်းကြောင်းအတွက် Synaptic ဂီယာနှင့်ဆန္ဒရှိအပြုအမူများ၏ကွဲပြားအခန်းကဏ္ဍ။ အာရုံခံဆဲလျ 66, 896-907 ။
Hiroi, N. နှင့် Graybiel, Am (1996) ။ Atypical နှင့်ပုံမှန် neuroleptic ကုသသည့် striatum အတွက်ကူးယူအချက်စကားရပ်၏ကွဲပြားအစီအစဉ်များကိုသွေးဆောင်။ ဂျေ comp ။ Neurol ။ 374, 70-83 ။
မြော်လင့်ခြင်း, BT, Nye, HE, Kelz, ကို MB, ကိုယ်ပိုင်, DW, Iadarola, MJ, Nakabeppu, Y. , Duman, RS, နှင့် Nestler, EJ (1994) ။ နာတာရှည်ကိုကင်းနှင့်အခြားနာတာရှည်ကုသမှုအားဖြင့်ဦးနှောက်ထဲမှာပြောင်းလဲ Fos တူသောပရိုတိန်း၏ရေးစပ်ရှည်-တည်မြဲ AP-1 ရှုပ်ထွေးသော၏ induction ။ အာရုံခံဆဲလျ 13, 1235-1244 ။
Horger, BA, Iyasere,, CA, Berhow, MT, Messer, CJ, Nestler, EJ နှင့်တေလာ, JR (1999) ။ ဦးနှောက်-ဆင်းသက်လာ neurotrophic အချက်အားဖြင့်ကိုကင်းဖို့ locomotor လှုပ်ရှားမှုနဲ့ conditional ဆုလာဘ်၏စွမ်းရည်မြှင့်။ ဂျေ neuroscience ။ 19, 4110-4122 ။
Ince, အီး, Ciliax, BJ နှင့် Levey, AI အ (1997) ။ ဖော်ထုတ် striatonigral အာရုံခံအတွက် D1 နှင့် D2 dopamine နဲ့ m4 muscarinic acetylcholine အဲဒီ receptor ပရိုတိန်း၏ differential စကားရပ်။ synapses 27, 357-366 ။
Iversen, ih (1993) ။ ကြွက်များတွင်အားဖြည့်အဖြစ်ဘီးပြေးနှင့်အတူအချိန်ဇယားထူထောင်ဘို့ techniques ။ ဂျေ Exp ။ စအို။ ပြုမူနေ။ 60, 219-238 ။
Jeon, ဂျေ, Dencker, ဃ, Wortwein, G. အ, Woldbye, DP, Cui, Y. , Davis က, AA ကို, Levey, AI အ, Schutz, G. အ, Sager, TN, Mork, အေလီ, C. , Deng, CX, က Fink-Jensen, အေနှင့် Wess, ဂျေ (2010) ။ အာရုံခံ M4 muscarinic acetylcholine receptors တစ် subpopulation dopamine-မှီခိုအပြုအမူတွေကိုပြောင်းလဲပစ်အတွက်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍမှပါဝင်သည်။ ဂျေ neuroscience ။ 30, 2396-2405 ။
Kalivas, PW (2009) ။ စွဲလမ်းမှု၏အချိုမှု homeostasis ယူဆချက်။ နတ်။ ဗျာ neuroscience ။ 10, 561-572 ။
Kelz, ကို MB, ချန်, ဂျေ, Carlezon, WA ဂျူနီယာ Whisler, K. , Gilden, အယ်လ်, Beckmann, Am, Steffen, C တို့, Zhang က, YJ, Marotti, အယ်လ်, ကိုယ်ပိုင်, DW, Tkatch, T- ။ , Baranauskas, G. အ, Surmeier, DJ သမား, Neve, RL, Duman, RS, Picciotto, MR နှင့် Nestler, EJ (1999) ။ ဦးနှောက်ထဲမှာကူးယူအချက် deltaFosB ၏ expression ကိုကင်းမှ sensitivity ကိုထိန်းချုပ်သည်။ သဘာဝ 401, 272-276 ။
ကင်ဂျေ, ပန်းခြံ, BH, Lee က, JH, ပန်းခြံ, SK ကိုနှင့်ကင် JH (2011) ။ ကိုကင်းဖို့ထပ်ခါထပ်ခါထိတွေ့မှုအားဖြင့်နျူကလိယ accumbens အတွက် cell အမျိုးအစား-တိကျတဲ့ပွောငျးလဲ။ Biol ။ စိတ်ရောဂါကုသမှု 69, 1026-1034 ။
Knapp, CM, Foye, MM, Cottam, N. , Ciraulo, DA နှင့် Kornetsky, C. (2001) ။ Adenosine agonists CGS 21680 နှင့် NECA ကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေး၏စတင်တားစီး။ Pharmacol ။ ထဲကဓာတုပစ်စညျး။ ပြုမူနေ။ 68, 797-803 ။
Kourrich, အက်စ်, Rothwell, PE, Klug, JR နှင့်သောမတ်စ်, MJ (2007) ။ ကိုကင်းအတွေ့အကြုံကိုယင်းနျူကလိယ accumbens အတွက် bidirectional Synaptic plasticity ထိန်းချုပ်သည်။ ဂျေ neuroscience ။ 27, 7921-7928 ။
Koya, အီး, ရွှေ, SA, Harvey, ကယ်, Guez-ဘာဘာ, DH, Berkow, အေ, Simmons, DE, Bossert, JM, Nair, စင်ကာပူဒေါ်လာ, Uejima, JL, Marin, MT, Mitchell က, တီဘီ, Farquhar, ဃ, Ghosh, SC, Mattson, BJ နှင့်မျှော်လင့်ခြင်း, BT (2009) ။ ကိုကင်း-activated နျူကလိယ၏ပစ်မှတ်ထားပြတ်တောက်အာရုံခံအခြေအနေတွင်-တိကျတဲ့ာင်းကာကွယ်ပေးသည် accumbens ။ နတ်။ neuroscience ။ 12, 1069-1073 ။
Kramer, PF, Christensen, CH, Hazelwood, LH, Dobi, အေ, Bock, R. , Sibley, DR, Mateo, Y. နှင့် Alvarez, VA သို့ (2011) ။ Dopamine D2 အဲဒီ receptor overexpression Drd2-EGFP ကြွက်များတွင်အပြုအမူများနှင့်ဇီဝြဖစ်စဉ်ပွောငျးလဲ။ ဂျေ neuroscience ။ 31, 126-132 ။
Kravitz, AV စနစ်, Freeze, BS, က Parker, PR စနစ်, ကေး, K. , သွင်, MT, Deisseroth, K. နှင့် Kreitzer, AC အ (2010) ။ Basal ganglia circuitry ၏ optogenetic ထိန်းချုပ်မှုတို့က parkinsonian မော်တာအပြုအမူတွေ၏စည်းမျဉ်း။ သဘာဝ 466, 622-626 ။
Kreitzer, AC အများနှင့် Malenka, RC (2007) ။ ပါကင်ဆန်ရောဂါမော်ဒယ်များအတွက် striatal, LTD နှင့်မော်တာလိုငွေပြမှု၏ Endocannabinoid-mediated ကယ်ဆယ်ရေး။ သဘာဝ 445, 643-647 ။
le Moines, C တို့, Normand, အီးများနှင့် Bloch, ခ (1991) ။ အဆိုပါ D1 dopamine receptor မျိုးရိုးဗီဇဖော်ပြကြွက် striatal အာရုံခံ၏ Phenotypical စရိုက်လက္ခဏာတွေ။ proc ။ Natl ။ Acad ။ သိပ္ပံ။ ယူအက်စ်အေ 88, 4205-4209 ။
le Moines, C တို့, Normand, အီး, Guitteny, AF, Fouque, ခ, Teoule, R. နှင့် Bloch, ခ (1990) ။ ကြွက် forebrain အတွက်အာရုံခံ enkephalin အားဖြင့် Dopamine receptor မျိုးရိုးဗီဇစကားရပ်။ proc ။ Natl ။ Acad ။ သိပ္ပံ။ ယူအက်စ်အေ 87, 230-234 ။
Lee က KW ကင်မ်, Y. ကင်မ်, Am, Helmin, K. , Nairn, AC အများနှင့် Greengard, P. (2006) ။ နျူကလိယ accumbens အတွက် D1 နှင့် D2 dopamine အဲဒီ receptor ပါဝင်သောအလတ်စား spiny အာရုံခံအတွက်ကင်း-သွေးဆောင် dendritic ကျောရိုးဖွဲ့စည်းခြင်း။ proc ။ Natl ။ Acad ။ သိပ္ပံ။ ယူအက်စ်အေ 103, 3399-3404 ။
Lemberger, တီ, Parlato, R. , Dassesse, ဃ, Westphal, အမ်, မြာပွေ, အီး, Turiault, အမ်, Tronche, အက်ဖ်, Schiffmann, SN နှင့် Schutz, G. အ (2007) ။ Cre ၏ expression dopaminoceptive အာရုံခံအတွက် recombinase ။ BMC neuroscience ။ 8, 4. doi: 10.1186/1471-2202-8-4
လက်တ, BT, Grant က, VL, Byrne, MJ နှင့် Koh သည်, MT (2000) ။ ဘီးပြေးထွက်ကုန်များ conditional ရာအရပျ preference ကို၏ aftereffect အတူထူးခြားတဲ့အခနျးဒဿနိကဗေဒ။ အလိုဆန္ဒ 34, 87-94 ။
Lobo, MK, Covington, HE III ကို, Chaudhury, ဃ, Friedman, AK, Sun က, အိပ်ချ်, Damez-Werno, ဃ, Dietz, DM, ပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့သမ္မတအိုဘားမားလွှတ်တော်မှာ, အက်စ်, Koo, JW, ကနေဒီ, PJ, Mouzon, E ကို ။ , Mogri, အမ်, Neve, RL, Deisseroth, K. , ဟန်, MH နှင့် Nestler, EJ (2010) ။ တူတဲ့ကင်းဆုလာဘ်၏ optogenetic ထိန်းချုပ်မှုအချက်ပြ BDNF ၏ဆဲလ်အမျိုးအစား-တိကျတဲ့အရှုံး။ သိပ္ပံ 330, 385-390 ။
Lobo, MK, Cui, Y. , Ostlund, SB, Balleine, BW နှင့်ယန်, XW (2007) ။ striatopallidal အာရုံခံဆဲလျ-တိကျတဲ့ S1P အဲဒီ receptor Gpr6 အားဖြင့်ဆာအေးစက်၏မျိုးဗီဇကိုထိန်းချုပ်။ နတ်။ neuroscience ။ 10, 1395-1397 ။
Lobo, MK, Karsten, SL, Gray, အမ်, Geschwind, DH နှင့်ယန်, XW (2006) ။ လူငယ်များနှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူ mouse ကိုဦးနှောက်အတွက် striatal projection အာရုံခံဆဲလျ Subtype ၏ FACS-ခင်းကျင်းကို။ နတ်။ neuroscience ။ 9, 443-452 ။
lu, အယ်လ်, Koya, အီး, Zhai, အိပ်ချ်, မျှော်လင့်ခြင်း, BT နှင့် Shaham, Y. (2006) ။ ကိုကင်းစွဲအတွက် ERK ၏အခန်းက္ပ။ ခေတ်ရေစီးကြောင်း neuroscience ။ 29, 695-703 ။
Mackie, K. (2008) ။ Cannabinoid receptors: သူတို့ဖြစ်ကြပြီး၎င်းတို့သည်အဘယ်သို့ပြုမည်အရာကိုရှိရာ။ ဂျေ Neuroendocrinol ။ 20 (ပျော့ပျောင်း။ 1), 10-14 ။
Maldonado, R. , Saiardi, အေ, Valverde, O. , Samad, TA, Roques, ကို BP နှင့် Borrelli, အီး (1997) ။ dopamine D2 receptors ချို့တဲ့ကြွက်တွေမှာ opiate ကြိုးသက်ရောက်မှုများမရှိခြင်း။ သဘာဝ 388, 586-589 ။
Mattson, BJ, Crombag, HS, Mitchell က, တီ, Simmons, DE, Kreuter, JD, Morales, အမ်နှင့်မျှော်လင့်ခြင်း, BT (2007) ။ အိမ်လှောင်အိမ်အပြင်ဘက်တွင်ထပ်ခါတစ်လဲလဲစိတ်ကြွဆေးအုပ်ချုပ်ရေးကြွက်နျူကလိယ accumbens အတွက်မူးယစ်ဆေး-သွေးဆောင် Fos စကားရပ်ပိုကောင်းစေပါတယ်။ ပြုမူနေ။ ဦးနှောက် Res ။ 185, 88-98 ။
ဝင်္, ဗြဲ, Covington, HE III ကို, Dietz, DM, Laplant, ဆိုးကျိုး, Renthal, ဒဗလျူ, Russo, SJ, စက်ပြင်, အမ်, Mouzon, အီး, Neve, RL, Haggarty, SJ, Ren, Y. , Sampath, SC, Hurd, YL, Greengard, P. , Tarakhovsky, အေ, Schaefer, အေနှင့် Nestler, EJ (2010) ။ ကိုကင်း-သွေးဆောင် plasticity အတွက် histone methyltransferase G9a ၏မရှိမဖြစ်အခန်းကဏ္ဍ။ သိပ္ပံ 327, 213-216 ။
Meisler, MH (1992) ။ Transgene ကြွက်များတွင် "ဂန္ထဝင်" နှင့်ဝတ္ထုမျိုးဗီဇ၏ INSERT mutation ။ ခေတ်ရေစီးကြောင်းမျိုးရိုးဗီဇ။ 8, 341-344 ။
မိုင်းလုပ်သား, ll, Drago, ဂျေ, Chamberlain, လေး, ဒိုနိုဗန်, ဃ, နှင့် Uhl, ထဲ၌အလင်းကိုထွန်းလင်း (1995) ။ D1 အဲဒီ receptor လစ်လပ်ကြွက်တွေမှာကင်းသောအခြေအနေများအရပျကို preference ကိုထိန်းသိမ်းထား။ Neuroreport 6, 2314-2316 ။
Monory, K. , Blaudzun, အိပ်ချ်, Massa, အက်ဖ်, Kaiser, N. , Lemberger, တီ, Schutz, G. အ, Wotjak, မှန် CT, Lutz, ခနှင့် Marsicano, G. အ (2007) ။ ကြွက်တွေမှာမြစ်ဝကျွန်းပေါ် (9) -tetrahydrocannabinol ၏အမူအကျင့်များနှင့်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရသက်ရောက်မှု၏မျိုးဗီဇခှဲစိတျ။ PLoS Biol ။ 5, e269 ။ Doi: 10.1371 / journal.pbio.0050269
Moratalla, R. , Robertson က HA နှင့် Graybiel, Am (1992) ။ အဆိုပါ striatum အတွက် NGFI-တစ်ဦးက (zif268, egr1) မျိုးဗီဇစကားရပ်၏ dynamic စည်းမျဉ်း။ ဂျေ neuroscience ။ 12, 2609-2622 ။
Moratalla, R. , Vallejo, အမ်, Elibol, ခနှင့် Graybiel, Am (1996) ။ D1-class ကို dopamine receptors striatum အတွက် Fos-related ပရိုတိန်း၏ကင်း-သွေးဆောင်မြဲစကားရပ်ကိုသြဇာလွှမ်းမိုး။ Neuroreport 8, 1-5 ။
Nestler, EJ (2005) ။ စွဲလမ်းတစ်ဘုံမော်လီကျူးလမ်းကြောင်းရှိပါသလား? နတ်။ neuroscience ။ 8, 1445-1449 ။
Nestler, EJ (2008) ။ ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း။ စွဲလမ်း၏မှတ်တမ်းယန္တရားများ: DeltaFosB ၏အခန်းကဏ္ဍ။ ဖီလို။ ဖြတ်ကျော်။ R. Soc ။ Lond ။ B က Biol ။ သိပ္ပံ။ 363, 3245-3255 ။
Nestler, EJ, Barrot, အမ်နှင့်ကိုယ်ပိုင်, DW (2001) ။ DeltaFosB: စွဲတစ်ခုစဉ်ဆက်မပြတ်မော်လီကျူး switch သည်။ proc ။ Natl ။ Acad ။ သိပ္ပံ။ ယူအက်စ်အေ 98, 11042-11046 ။
Novak, အမ်, Halbout, ခ, O'Connor, EC, Rodriguez Parkitna, ဂျေ, စု, တီ, ချိုင်, အမ်, Crombag, HS, ဘေလ်ဘောင်, အေ, Spanagel, R. , Stephens, DN, Schutz, G. အများနှင့် Engblom, ဃ (2010) ။ အခြေခံကင်း-ရှာသင်ယူခြင်းမက်လုံးပေး dopamine D5 အဲဒီ receptor-ဖော်ပြအာရုံခံပေါ်တွင်တည်ရှိပြီး mGluR1 receptors လိုအပ်သည်။ ဂျေ neuroscience ။ 30, 11973-11982 ။
Numano, R. , Szobota, အက်စ်, Lau, AY, Gorostiza, P. , Volgraf, အမ်, Roux, ခ, Trauner, ဃ, နှင့် Isacoff, EY (2009) ။ Nanosculpting တစ် photoswitchable iGluR သို့လှိုင်းအလျား sensitivity ကိုပြောင်းပြန်လုပ်လိုက်တယ်။ proc ။ Natl ။ Acad ။ သိပ္ပံ။ ယူအက်စ်အေ 106, 6814-6819 ။
Nye, HE, မျှော်လင့်ခြင်း, BT, Kelz, ကို MB, Iadarola, အမ်နှင့် Nestler, EJ (1995) ။ အဆိုပါ striatum နှင့်နျူကလိယ accumbens အတွက်ကင်းသဖြင့်နာတာရှည် FOS-related ကိုပဲ induction ၏စည်းမျဉ်းများ Pharmacological လေ့လာမှုများ။ ဂျေ Pharmacol ။ Exp ။ Ther ။ 275, 1671-1680 ။
Parkitna, JR, Engblom, ဃ, နှင့် Schutz, G. အ (2009) ။ ဘက်တီးရီးယားအတုခရိုမိုဇုန်းကို အသုံးပြု. Cre recombinase-ဖော်ပြ Transgene ကြွက်၏မျိုးဆက်။ နည်းလမ်းများ Mol ။ Biol ။ 530, 325-342 ။
Peakman, MC, Colby, C တို့, Perrotti, LI, Tekumalla, P. , Carl, တီ, Ulery, P. , Chao, ဂျေ, Duman, C တို့, Steffen, C တို့, Monteggia, အယ်လ်, Allen က, MR, စတော့အိတ်, JL, Duman, RS, Mcneish, JD, Barrot, အမ်, ကိုယ်ပိုင်, DW, Nestler, EJ နှင့် Schaeffer, အီး (2003) ။ Transgene ကြွက်တွေမှာက c-ဇွန်၏အလွှမ်းမိုးအနုတ်လက္ခဏာ Mutant ၏သွေးဆောင်, ဦးနှောက်ဒေသ-တိကျတဲ့စကားရပ်ကိုကင်းမှ sensitivity ကိုလျော့နည်းစေပါသည်။ ဦးနှောက် Res ။ 970, 73-86 ။
လူမျိုး, ll, Uzwiak, AJ, Guyette, FX, နှင့်အနောက်, MO ကို (1998) ။ တစ်ခုတည်းနျူကလိယ၏လုပ်သူများတားစီးကြွက်များတွင်အာရုံခံ accumbens: ကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးအစည်းအဝေးများအားဖြင့်သွေးဆောင်တစ်မြင်သာထင်သာဘဲသီးသန့်ပစ်ခတ်ရန်ပုံစံ။ neuroscience 86, 13-22 ။
Perrotti, LI, Hadeishi, Y. , Ulery, PG, Barrot, အမ်, Monteggia, အယ်လ်, Duman, RS, နှင့် Nestler, EJ (2004) ။ နာတာရှည်စိတ်ဖိစီးမှုပြီးနောက်ဆုလာဘ်-related ဦးနှောက်ဖွဲ့စည်းပုံထဲမှာ deltaFosB ၏ induction ။ ဂျေ neuroscience ။ 24, 10594-10602 ။
ပီယပ်, RC, ဘဲလ်, K. , Duffy, P. နှင့် Kalivas, PW (1996) ။ ထပ်ခါတစ်လဲလဲကင်းနျူကလီးယပ်အတွက် excitatory အမိုင်နိုအက်ဆစ်ဂီယာသာအပြုအမူာင်းဖွံ့ဖြိုးဘဲလျက်ကြွက်များတွင် accumbens ကြီးထွားများပြားစေ။ ဂျေ neuroscience ။ 16, 1550-1560 ။
မြင့်တက်, fo, Freeman က, PA, Rubinstein, အမ်, အနိမျ့, MJ နှင့်ယူဆပါတယ်, DK (2000) ။ dopamine D2 အဲဒီ receptor နောက်ကောက်ကြွက်တွေမှာအော်ပရေတာအီသနော Self-အုပ်ချုပ်မှုမရှိခြင်း။ Psychopharmacology (Berl ။ ) 152, 343-350 ။
Robertson က HA ပေါလုသည် ML, Moratalla, R. နှင့် Graybiel, Am (1991) ။ Basal ganglia အတွက်ချက်ချင်းအစောပိုင်းဗီဇက c-fos ၏ expression: dopaminergic မူးယစ်ဆေးဝါးများအားဖြင့်သော induction ။ နိုင်သလား။ ဂျေ Neurol ။ သိပ္ပံ။ 18, 380-383 ။
Russo, SJ, Dietz, DM, Dumitriu, ဃ, Morrison, JH, Malenka, RC နှင့် Nestler, EJ (2010) ။ အဆိုပါစွဲ synapses: နျူကလိယ accumbens အတွက် Synaptic နှင့်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ plasticity ၏ယန္တရားများ။ ခေတ်ရေစီးကြောင်း neuroscience ။ 33, 267-276 ။
Schiffmann, SN, Libert, အက်ဖ်, Vassart, G. အများနှင့် Vanderhaeghen, JJ (1991) ။ လူ့ဦးနှောက်ထဲမှာ adenosine A2 အဲဒီ receptor mRNA ၏ဖြန့်ဝေ။ neuroscience ။ လက်တ။ 130, 177-181 ။
Schiffmann, SN နှင့် Vanderhaeghen, JJ (1993) ။ Adenosine A2 receptors striatopallidal နှင့် striatonigral အာရုံခံ၏မျိုးဗီဇစကားရပ်ကိုထိန်းညှိ။ ဂျေ neuroscience ။ 13, 1080-1087 ။
ကိုယ်ပိုင်, DW (2010) ။ "ဆုလာဘ်များနှင့် relapse အတွက် Dopamine အဲဒီ receptor Subtype" အတွက် အဆိုပါ Dopamine receptor, ed ။ Ka Neve (နယူးယောက်, NY: Humana စာနယ်ဇင်း), 479-523 ။
ကိုယ်ပိုင်, DW, Barnhart, WJ, Lehman, DA နှင့် Nestler, EJ (1996) ။ D1- နှင့် D2 ကဲ့သို့ dopamine အဲဒီ receptor agonists အားဖြင့်ကိုကင်း-ရှာကြံအပြုအမူ၏ဆန့်ကျင်ဘက်မော်ဂျူ။ သိပ္ပံ 271, 1586-1589 ။
Surmeier, DJ သမား, Ding, ဂျေ, နေ့, အမ်, ဝမ်, Z. နှင့် Shen, ဒဗလျူ (2007) ။ striatal အလတ်စား spiny အာရုံခံအတွက် striatal glutamatergic အချက်ပြ၏ D1 နှင့် D2 dopamine-receptor မော်ဂျူ။ ခေတ်ရေစီးကြောင်း neuroscience ။ 30, 228-235 ။
Surmeier, DJ သမား, သီချင်း, WJ နှင့်ယန်, Z. (1996) ။ neostriatal အလတ်စား spiny အာရုံခံအတွက် dopamine receptors ၏စကားရပ်ညှိနှိုင်းပေးသည်။ ဂျေ neuroscience ။ 16, 6579-6591 ။
Thanos, PK, Michaelides, အမ်, Umegaki, အိပ်ချ်, နှင့် Volkow, ND (2008) ။ နျူကလီးယပ် accumbens သို့ D2R DNA ကိုလွှဲပြောင်းကြွက်များတွင်ကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေး attenuates ။ synapses 62, 481-486 ။
Thanos, PK, Taintor, NB, Rivera, SN, Umegaki, အိပ်ချ်, Ikari, အိပ်ချ်, Roth, G. အ, Ingram, DK, Hitzemann, R. , မုဆိုး, JS, Gatley, SJ, ဝမ်, GJ နှင့် Volkow , ND (2004) ။ ယင်းနျူကလိယသို့ DRD2 ဗီဇလွှဲပြောင်းသည့်အရက်၏အမာခံကြွက်များပိုနှစ်သက်နှင့် nonpreferring အရက်သေစာသောက်သုံး attenuates accumbens ။ အရက်။ Clin ။ Exp ။ res ။ 28, 720-728 ။
သောမတ်စ်, MJ, Beurrier, C တို့, Bonci, အေနှင့် Malenka, RC (2001) ။ နျူကလီးယပ်အတွက်ရေရှည်စိတ်ကျရောဂါ accumbens: ကင်းရန်အမူအကျင့်အကဲဆတ်ခြင်းတစ်ဦးအာရုံကြော Correlate ။ နတ်။ neuroscience ။ 4, 1217-1223 ။
Uslaner, ဂျေ, Badiani, အေ, နေ့, HE, Watson, SJ, Akil, အိပ်ချ်, နှင့်ရော်ဘင်ဆင်, TE (2001a) ။ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးအခြေအနေတွင်က c-fos အဆိုပါ neocortex အတွက် mRNA စကားရပ်, caudate နျူကလိယနှင့်နျူကလိယ accumbens သွေးဆောင်ဖို့ကိုကင်းနှင့်အဖက်တမင်းမူးယစ်ဆေးဝါးများ၏စွမ်းရည်ကို modulates ။ ဦးနှောက် Res ။ 920, 106-116 ။
Uslaner, ဂျေ, Badiani, အေ, က Norton, CS, နေ့, HE, Watson, SJ, Akil, အိပ်ချ်, နှင့်ရော်ဘင်ဆင်, TE (2001b) ။ ဖက်တမင်းဆေးပြားနှင့်ကိုကင်းသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေတွင်ပေါ် မူတည်. အဆိုပါ striatum အတွက်က c-fos mRNA စကားရပ်နှင့် subthalamic နျူကလိယ၏ကွဲပြားခြားနားသောပုံစံများသွေးဆောင်။ အီးယူအာရ်။ ဂျေ neuroscience ။ 13, 1977-1983 ။
Valjent, အီး, Bertran-Gonzalez, ဂျေ, Herve, ဃ, Fisone, G. အများနှင့် Girault ဂျေအေ (2009) ။ striatal အချက်ပြမှာ BAC ရှာနေ: အသစ်အရ Transgene ကြွက်တွေမှာဆဲလ်-တိကျတဲ့ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။ ခေတ်ရေစီးကြောင်း neuroscience ။ 32, 538-547 ။
Valjent, အီး, Corvol, JC, စာမျက်နှာများ, C တို့, Besson, MJ, Maldonado, R. နှင့် Caboche, ဂျေ (2000) ။ ကိုကင်း-ဆုချီးဂုဏ်သတ္တိများများအတွက် extracellular signal ကို-စညျးမဉျြးစညျးကမျး kinase အဆငျ့ဆငျ့၏ပါဝင်ပတ်သက်မှု။ ဂျေ neuroscience ။ 20, 8701-8709 ။
Vialou, V. , Robison, AJ, Laplant, QC, Covington, HE III ကို, Dietz, DM, Ohnishi, yn, Mouzon, အီး, Rush, AJ III ကို, Watts, EL, Wallace, DL, Iniguez, SD, Ohnishi, YH, Steiner MA, Warren, BL, Krishnan, V. , Bolanos,, CA, Neve, RL, Ghose, အက်စ်, Berton, O. , Tamminga,, CA များနှင့် Nestler, EJ (2010) ။ ဦးနှောက်အကြိုးကိုဆားကစ်အတွက် DeltaFosB စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်လက္ခဏာတုံ့ပြန်မှုမှခံနိုင်ရည် mediates ။ နတ်။ neuroscience ။ 13, 745-752 ။
Volgraf, အမ်, Gorostiza, P. , Numano, R. , Kramer, RH အ, Isacoff, EY နှင့် Trauner, ဃ (2006) ။ တစ်ဦး optical switch ကိုအတူတစ် ionotropic အချိုမှု receptor ၏ Allosteric ထိန်းချုပ်မှု။ နတ်။ Chem ။ Biol ။ 2, 47-52 ။
Volkow, ND, မုဆိုး, JS, ဝမ်, GJ, Baler, R. နှင့် Telang, အက်ဖ် (2009) ။ မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုနှင့်စွဲလမ်းအတွက် imaging dopamine ရဲ့အခန်းကဏ္ဍ။ Neuropharmacology 56 (ပျော့ပျောင်း။ 1), 3-8 ။
Volkow, ND, မုဆိုး, JS, ဝမ်, GJ နှင့် Swanson, JM (2004) ။ မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုနှင့်စွဲလမ်းအတွက် Dopamine: ပုံရိပ်လေ့လာမှုများနှင့်ကုသမှုသက်ရောက်မှုတွေကနေရလဒ်တွေကို။ Mol ။ စိတ်ရောဂါကုသမှု 9, 557-569 ။
Welter, အမ်, Vallone, ဃ, Samad, TA, Meziane, အိပ်ချ်, Usiello, အေနှင့် Borrelli, အီး (2007) ။ dopamine D2 receptors ၏မရှိခြင်းကိုကင်းများက activated ဦးနှောက် circuitries ကျော်တစ်ဦး inhibitory ထိန်းချုပ်မှု unmasks ။ proc ။ Natl ။ Acad ။ သိပ္ပံ။ ယူအက်စ်အေ 104, 6840-6845 ။
Werme, အမ်, Messer, C တို့, Olson, အယ်လ်, Gilden, အယ်လ်, Thoren, P. , Nestler, EJ နှင့် Brene, အက်စ် (2002) ။ မြစ်ဝကျွန်းပေါ် FosB ဘီးပြေးထိန်းညှိ။ ဂျေ neuroscience ။ 22, 8133-8138 ။
အဖြူ, FJ, Hu, XT, Zhang က, XF နှင့် Wolf က, ME (1995) ။ ကိုကင်းသို့မဟုတ်စိတ်ကြွဆေး၏ထပ်ခါတစ်လဲလဲအုပ်ချုပ်ရေးအတွက် mesoaccumbens dopamine စနစ်အချိုမှုမှအာရုံခံတုံ့ပြန်မှုပွောငျးလဲ။ ဂျေ Pharmacol ။ Exp ။ Ther ။ 273, 445-454 ။
ပညာရှိ RA (2004) ။ Dopamine, သင်ယူမှုနှင့်လှုံ့ဆျောမှု။ နတ်။ ဗျာ neuroscience ။ 5, 483-494 ။
ဝံပုလွေ, ME (2010) ။ dopamine နဲ့ကိုကင်းအားဖြင့်နျူကလိယ accumbens အတွက် AMPA အဲဒီ receptor လူကုန်ကူးမှု၏စည်းမျဉ်း။ Neurotox ။ res ။ 18, 393-409 ။
ဝူ, Yi, Frey, ဃ, Lungu, Oi, Jaehrig, အေ, Schlichting, ဗြဲ, Kuhlman, ခနှင့် Hahn, KM (2009) ။ တစ်ဦးကမျိုးရိုးဗီဇ encoded photoactivatable Rac သက်ရှိဆဲလ်များ၏ Motilal ထိန်းချုပ်သည်။ သဘာဝ 461, 104-108 ။
လူငယ်တို့, ST, Porrino, LJ နှင့် Iadarola, MJ (1991) ။ ကိုကင်း dopaminergic D1 receptors မှတဆင့် striatal က c-fos-immunoreactive ပရိုတိန်းဖြစ်ပေါ်သည်။ proc ။ Natl ။ Acad ။ သိပ္ပံ။ ယူအက်စ်အေ 88, 1291-1295 ။
Zachary, V. , Bolanos,, CA, Selley, DE, Theobald, ဃ, Cassidy, အမတ်, Kelz, ကို MB, Shaw-Lutchman, တီ, Berton, O. , Sim-Selley, LJ, Dileone, RJ, Kumar က, A. အများနှင့် Nestler, EJ (2006) ။ မော်ဖင်းအကိုက်အရေးယူအတွက်နျူကလိယ accumbens အတွက် DeltaFosB များအတွက်မရှိမဖြစ်အခန်းကဏ္ဍ။ နတ်။ neuroscience ။ 9, 205-211 ။
Zhang က, ဂျေ, Zhang က, အယ်လ်, ကွန်ဖူး, အိပ်ချ်, Zhang ကမည်သို့, Zhang က, ဃ, အဘိဓါန် Lou, ဃ, Katz, JL နှင့် Xu, အမ် (2006) ။ က c-Fos ကင်း-သွေးဆောင်မြဲပြောင်းလဲမှုများဝယ်ယူခြင်းနှင့်မျိုးသုဉ်းနိုင်အောင်စီစဉ်ပေးထားတယ်။ ဂျေ neuroscience ။ 26, 13287-13296 ။
Zhang က, XF, Hu, XT နှင့်အဖြူရောင်, FJ (1998) ။ ကိုကင်းရုပ်သိမ်းရေးအတွက်မြေတပြင်လုံး-ဆဲလ် plasticity: နျူကလိယ accumbens အာရုံခံအတွက်ဆိုဒီယမ်ရေစီးကြောင်းလျှော့ချ။ ဂျေ neuroscience ။ 18 488-498 ။
keywords: အလတ်စား spiny အာရုံခံ, စွဲလမ်း, နျူကလိယ accumbens, ဆဲလ်-type အမျိုးအစား-တိကျတဲ့, D ကို1+ MSNs, D ကို2+ MSNs, ကင်း, dopamine
ကိုးကား: Lobo MK နှင့် Nestler EJ (2011) မူးယစ်ဆေးစွဲရှိ striatal balancing လုပ်ရပ်: တိုက်ရိုက်နှင့်သွယ်ဝိုက်လမ်းကြောင်းအလတ်စား spiny အာရုံခံ၏ကွဲပြားအခန်းကဏ္ဍ။ တပ်ဦး။ Neuroanat ။ 5: 41 ။ Doi: 10.3389 / fnana.2011.00041
Received: 12 မေလ 2011; စက္ကူဆိုင်းငံ့ထုတ်ဝေ: 31 မေလ 2011;
လက်ခံခဲ့သည်: 05 ဇူလိုင်လ 2011; အွန်လိုင်း Published: 18 ဇူလိုင်လ 2011 ။
Emmanuel Valjent, Université Montpellier 1 & 2, ပြင်သစ်
ယောဟနျသ Neumaierတက္ကသိုလ်ဝါရှင်တန်, အမေရိကန်နိုင်ငံ၏
မူပိုင်: 2011 Lobo နှင့် Nestler ©။ ဒါဟာစာရေးသူနှင့်အခြားဖိုရမ်များအတွက်အသုံးပြုမှုကိုခွင့်ပြုထားတဲ့ Frontiers မီဒီယာလုပ် SA, ဖြန့်ဖြူးခြင်းနှင့်မျိုးပွားအကြား non-သီးသန့်လိုင်စင်တစ်ခု Open-access ကိုဆောင်းပါးဘာသာရပ်ဖြစ်ပါသည်, မူရင်းစာရေးဆရာများနှင့်အရင်းအမြစ်အသိအမှတ်ပြုကြသည်နှင့်အခြား Frontiers အခြေအနေများနှင့်အတူလိုက်နာနေကြသည်။
* ပေးစာယူ: အဲရစ်ဂျေ Nestler, အာရုံကြောသိပ္ပံဌာန, Friedman ဦးနှောက် Institute မှ, ဆေးပညာသိနာတောင်ပေါ်ကျောင်း, တစ်ဦးက Gustave အယ်လ် Levy ရာဌာန, Box ကို 1065, နယူးယောက်, NY 10029-6574, USA ။ e-mail,: [အီးမေးလ်ကိုကာကွယ်ထားသည်]